ခဈြစနိုး – Hlataw.com
မိုးကအရမျးသဲသဲမဲမဲရှာနသေညျ.. ။ လရေောမိုးရောသညျးထနျနသေညျ.. ။အိမျမှာစနိုးတယောကျထဲ.. ။အမကေ..ဒီနေ့ အလုပျပိတျရကျမို့.. အနျတီဒျေါလီတို့အိမျကိုသှားသညျ. . ။အကွီးမမိုနာကဒီနေ့.. အလုပျသှားသညျ. . ။အိပျရာထဲစောငျခွုံကာကှေးနမေိသညျ. .။ ကြောငျးကအတနျးဖျေါသူငယျခငျြးမီရှယျလျဆီကငှားလာတဲ့ဒီဗှီဒီကိုသတိရပွီး စကျထဲထိုးထညျ့ပွီးကွညျ့လိုကျသညျ.. ။အာရှသူတှနေဲ့အဖွူကောငျတှေ နှဈပါးသှားတာတှကေိုကွညျ့ပွီးစနိုးစိတျတှမေရိုးမရှဖွဈလာသညျ.။ လေးဘကျကုနျးကာဖငျထောငျပေးထားနတေဲ့အာရှသူလေးကိုအဖွူကောငျက လီးတုတျတုတျကွီးနဲ့ဆောငျ့လိုးနတောကွညျ့ပွီး.. စနိုးမှာခံခငျြစိတျတှတေဖှါးဖှါး ပျေါပေါကျပွီးထကွှလာရတော့သညျ..။ မီရှယျလျကဒီ. .. ဒီဗှီဒီထဲကအာရှသူတယောကျကစနိုးနဲ့ခြှတျစှတျဘဲ… ကွညျ့ပါဆိုပွီးငှားလိုကျတာပါ. . ။စနိုးအိမျနရေငျးထမိနျနှမျးလေးဝတျထားးသညျ..။ ကုတငျပျေါစောငျခွုံရငျးကွညျ့နတော.. အပွာကားထဲကယောကငြ်ျားလိငျတနျထှားထှားတှကေို ကွညျ့ပွီးအသဲယားလာသညျ. . ။စနိုးရဲ့ဖွိုးဖွိုးရှရေငျတှရေဲ့နို့သီးလေးတှေ..မာတောငျ လာသညျ. . ။ပေါငျကွားထဲကဆီးခုံကွီးကဖါးခုံညငျးကွီးတကောငျလိုခုံးမောကျပွီး အဖုတျထဲကယားလာသညျ.. ။အဖုတျနှုတျခမျးသားတှထေူအမျးပွီးယားလာသညျ. .။ ပွကြှေတျနသေောထမိနျအပျေါကဘဲအဖုတျကိုကိုငျစမျးမိနသေညျ. .လကျခြောငျးတှကေ အဖုတျနှုတျခမျးသားတှကေိုစမျးနမေိသညျ.. ။
အရတှေစေိုနပွေီ..။လကျတဖကျက အဖုတျကိုပှတျနမေိတဲ့အခြိနျကနျြလကျတဖကျကနို့သီးတှကေိုစမျးကွညျ့ပွီး.. ပှတျနမေိသညျ.. ။ စနိုးအခုအခြိနျအထိအပြိုစဈနသေေးသညျ.. ။သူမဖါသာ ပှတျနှိုကျတာကလှဲလို့ယောကငြ်ျားလီးနဲ့မတှဘေူ့းသေး..။လီးနဲ့..အထိုးမခံဘူးသေးတာကို ပွောတာပါ.. ။လီးကိုတော့စနိုးကိုငျကွညျ့ဘူးပွီးပွီ..။စနိုးနဲ့..အမွဲတှဲဖွဈတဲ့..ကြောငျးအတူ တကျတဲ့မီရှယျလျကွောငျ့ပေါ့. .။ ဒီတိုငျးပွညျရောကျမှစနိုးအပြိုဖွဈသညျလို့ပွောရမှာပါ.. ။နယျစပျကစခနျးတုံး ကရငျပွားတငျပွားလေးနဲ့. အပြိုပေါကျစလေး..။ ဒီအမရေိကနျပွညျရောကျပွီးမှစနိုးထှားလာသညျ.. ။အမပွေောတာ ထငျတာကတော့ဒီမှာစားတဲ့နို့..ထောပတျ.. ဒိနျခဲတှနေဲ့ဟျောမုနျးတှမြေားတဲ့ အသားတှကွေောငျ့ဖွဈမယျ.. တဲ့. .။ မီရှယျလျနဲ့တည.. ကလပျတခုကိုလိုကျရငျး.. ဘီယာသောကျကွသညျ.. ။ကလပျကအပွနျ . . ယောကငြ်ျားလေးတအုပျနဲ့..တောအုပျလေးထဲ.. ဆေးခွောကျရှူကွပွီး… မီရှယျလျရဲ့အကို တငျမီကစနိုးကိုနမျးသညျ. .။ စနိုးလဲ..ဘီယာသောကျထားတဲ့အရှိနျနဲ့.. သူ့ကိုပွနျနမျးသညျ..။ ရီးစားလဲမဟုတျ.. ဘာမှလဲမဟုတျ.. ။တငျမီကစနိုးရဲ့နို့ကိုကိုငျသညျ..။ နို့သီးလေးတှကေိုပှတျသညျ. . ။လကျမနဲ့လကျညှိုးကိုသုံးပွီးဖှဖှလေးခသြေညျ. .။ သူ့ဘောငျးဘီဇဈကိုဖှငျ့ခပြွီးလီးကိုထုတျသညျ. . ။ စနိုး.. ကိုငျကွညျ့..ဆိုပွီး စနိုးလကျထဲလီးကွီးလာထညျ့သညျ. . ။စနိုးလဲစိတျတှလှေုပျရှားပွီးတငျမီ့… လီးတနျကွီးကိုကိုငျသညျ. . ။ဖဈြညှဈသညျ. . ။ရှတေို့းနောကျငငျကစားသညျ. .။ ဒီထကျတော့မပို.. ။ အျော. . မနညေ့ကလဲတအိမျထဲနတေဲ့.. ကိုတိုးကွီးရဲ့လီးကို..စနိုးတှဘေူ့းလိုကျရသညျ .. ။
ကိုတိုးကွီးကမွအေောကျထပျ ဘစျေ့မငျ့ မှာနသေညျ.. ။မွအေောကျထပျမှာလဲ အိမျသာနဲ့ရခြေိုးခနျးတှဲရကျပါသညျ..။ စနိုး..မိုနာတို့..ညီအမနဲ့ကိုတိုးကွီးကတအိမျထဲနပွေီးမောငျနှမတှလေိုဘဲ..အတူခကျြစား..အတူ..ဗှီဒီယို.. ကွညျ့ကွသညျ.. ။ဒီအိမျမှာစနိုး.. မိုနာ.. အမေ.. နဲ့ဖူးဖူးတို့နသေညျ. .။ ကိုတိုးကွီးရှိတဲ့မွအေောကျထပျကိုစနိုး.. မိုနာတို့ညီအမတှနေဲ့ဖူးဖူးတို့တံခါးမရှိ ဒါးမရှိဆငျးသှားနကွေ.. ရုပျရှငျအတူထိုငျကွညျ့နကေဖြွဈသညျ.. ။ဖူးဖူးကစနိုးတို့နဲ့ ဘာမှမတျော။နယျစပျစခနျးထဲကဆှမြေိုးလိုဘဲအတူတူနခေဲ့ကွတဲ့သူတှပေေါ့.. ကိုတိုးကွီးကစနိုးတို့ဖူးဖူးတို့လိုထိုငျးနယျစပျကလာခဲ့တာမဟုတျဘူး. .။ကိုတိုးကွီးက..သင်ျဘောဝမျးဘိုကျထဲမှာတရုတျလူမြိုးတှနေဲ့အတူ..ခိုးဝငျပွီး. .နယူးယောကျကို ရောကျလာတဲ့လူ.. ။ဒီရောကျမှ.. အလုပျလုပျခှငျ့ ဝကျပါမဈ ရအောငျကွံဖနျပွီး တဆငျ့ပွီးတဆငျ့အဆငျပွလောသူတယောကျပါ. . ။အလုပျအမြိုးမြိုးလုပျလာသူ တယောကျ…။ မနညေ့ကကိုတိုးကွီးနတေဲ့အောကျထပျစနိုးဆငျးသှားတော့ကိုတိုးကွီး အပွာဒီဗှီဒီရုပျရှငျကွီးပွရကျတနျးလနျးကွီးနဲ့ထိုငျရကျကွီးအိပျပြျောနသေညျ. .။သူ အိပျမပြျောခငျကလုံခညျြကိုဖွခေပြွီးကှငျးထုနပေုံဘဲ. . ။ကွညျ့ရတာအလုပျ၃ခုလောကျ ဆကျတိုကျလုပျတဲ့လူမို့..အရမျးပငျပနျးပွီး.ကှငျးထုနရေငျး..ထိုငျရကျကွီး….အိပျပြျောသှားတဲ့ ပုံပါ. . ။သူ့လုံခညျြကပွကေနြပွေီးသူ့လီးညိုညိုကွီးကမတျမတျကွီးတောငျနသေညျ . . ။စနိုးလဲရုတျတရကျကိုတိုးကွီးရဲ့လီးတုတျတုတျကွီးကိုမွငျလိုကျရတော့.. ရငျတှတေအားခုနျ.. စိတျတှလှေုပျရှားရသညျ. . ။ကွကျသီးတှထေရသညျ. .။ ကိုတိုးကွီးနဲ့..သှားအတူလာအတူ…နီးနီး.စပျစပျနလောကွတာ..သူ့မှာ…ဒီလို..လီးတုတျတုတျ ရှညျရှညျကွီးရှိနတောမသိရဘူး. . ။
စနိုးလဲသူ့ဘေးနားကပျပွီးလီးကွီးကို..သသေခြောခြာ ကွညျ့တာတောငျကိုတိုးကွီး.. တရှူးရှူးနဲ့အိပျမောကနြပွေီး. . ဘာမှမသိ. .။ ဟိတျ.. စနိုး. . ဘယျလောကျတောငျကွညျ့ကောငျးကောငျးနဲ့ကွညျ့မိနသေလဲမသိဘူး..။ အနောကျကချေါသံကွောငျ့လှညျ့ကွညျ့မိလိုကျတော့. . ဖူးဖူးအောကျထပျ ဆငျးလာတာဖွဈနသေညျ. . ။ဖူးဖူးကစနိုးနဲ့မိုနာတို့ညီအမတှထေကျအသကျနဲနဲ ပိုကွီးသညျ. . ။၂၅နှဈလောကျရှိပွီ. . ။ရီးစားထားဘူးပွီးယောကငြ်ျားအတှအေ့ကွုံရှိသညျ။ စနိုးက. . ရှူး. . ဆိုပွီးလကျညှိုးကိုသူ့နှုတျခမျးလေးမှာကပျပွီး..ကိုတိုးကွီး လီးပျေါနတောကိုဖူးဖူးကိုပွလိုကျသညျ. . ။ဖူးဖူးလဲခွဖေေါ့နငျးပွီးအနားကပျလာသညျ . . ။ကိုတိုးကွီးလီးကွီးကိုသသေခြောခြာကွညျ့သညျ..။ ဖူးဖူးသညျကိုတိုးကွီးရဲ့လီးတုတျတုတျကွီးကိုအနီးကပျကွညျ့ရငျး. .သူမ ပေါငျကွားကိုလကျနဲ့ကိုငျလိုကျသညျ.. ။စနိုးကသဘောကစြှာနဲ့တခိခိရယျသညျ.။ မနညေ့ကအကွောငျးပွနျတှေးလိုကျမိတော့.. ကိုတိုးကွီးလီးကွီးကို ပွနျမွငျယောငျသှားပွီးကိုတိုးကွီးလီးကွီးကိုထပျမွငျလိုစိတျဖွဈမိရသညျ.. ။ကိုတိုးရဲ့ လီးကွီးကညိုညိုကွီး.. ။အကွောကွီးတှထေောငျထနပွေီး. . ထိပျကဒဈဆိုတဲ့ ဟာကွီးကကောကျကောကျကွီး.. ။ဒါကွီးနဲ့စောကျပတျထဲထိုးထဲ့ရငျဆနျ့မှ ဆနျ့ပါ့မလားမသိဘူး. . ။စောကျပတျကလကျညှိးတောငျမနဲသှငျးနရေတာ. . ။ကှဲပွဲ သှားမလား. . ဆိုပွီးကွကျသီးတှထေရသညျ. . ။စနိုးကိုတိုးကွီးရဲ့လီးညိုကွီးကို မွငျယောငျရငျး. . သူမအဖုတျကိုဖိဖိပှတျရငျးတဟငျးဟငျးနဲ့ကာမအရှိနျတှေ တကျလာသညျ.. ။
အရတှေစေိုစိုရှဲနတေဲ့မိမိအဖုတျထဲကိုတခုခုနဲ့ထိုးသှငျးကာ အာသာဖွဖြေောကျလိုတဲ့စိတျတှအေလှနျအမငျးဖွဈပျေါနပွေီ.. ။ ဖူးဖူးကတော့ပွောသညျ.. ။ဒါသဘာဝဘဲစနိုး… တဲ့. . ။ယောကငြ်ျားတှကေမိနျးမ စောကျပတျကိုမွငျရငျစိတျကွှသလို.. မိနျးမတှကေလဲယောကငြ်ျားလီးကိုတှရေ့ငျ စိတျကွှကွရတာဘဲပေါ့.. တဲ့. . ။ ကိုတိုးကွီးသညျစနိုးတို့အမဒေျေါအယျနာနဲ့အလုပျ.. အတူတူလုပျရာက… ဒျေါအယျနာကယောကငြ်ျားလေးအဖျေါလဲရအောငျသူတို့နဲ့စပျပွီး.. အိမျငှားနဖေို့ပွောတာနဲ့ဒျေါအယျနာတို့နဲ့အခုလိုလာပေါငျးပွီးနတောဖွဈသညျ…။ သမီး၂ယောကျအမဒေျေါအယျနာသညျ.. ဖွူဖှေးတောငျ့တငျးဆဲ.. ကိုယျလုံးပိုငျရှငျဒျေါအယျနာ.. ဖွူလှနျးဖှေးလှနျးလို့..အိမျနံမညျ စနိုးလို့ချေါတဲ့ခငျနှငျးဖွူ… သူမထကျတနှဈဘဲကွီးတဲ့တောငျ့တငျးစိုပွတေဲ့မိုနာ .. သူတို့နဲ့အရမျးရငျးနှီးတဲ့ဖူးဖူး.. မိနျးမခြော၎ယောကျနဲ့တအိမျထဲနရေတဲ့ ကိုတိုးကွီး.. သညျမခြောလေးယောကျကိုယျတယောကျဆိုတဲ့ဇာတျလမျးဖွဈနပွေီ . . ။အတူတူနတေော့. . ဒီမခြော၎ယောကျအောကျစလှတျတတှေ..ဖငျပျေါတာတှေ . တှလေ့ာရသညျ. .။တခါတလေ… ..သူတို့ဖါသာပေါငျကွားပှတျနတော…. နှိုကျနတောတှတေောငျတှဘေူ့းရ သညျ. . ။ဒါတှကေိုသာယာမိနပွေီးကိုတိုးကွီးလဲ… ဒီမိနျးမတှရေဲ့ခိုငျးဘတျကွီး ဖွဈမှနျးမသိဖွဈလာသညျ.. ။ ဒျေါအယျနာသညျကိုတိုးကွီးကိုအလှနျဘဲအားကိုးသညျ.. ။အားထား သညျ.. ။
လငျသမေုဆိုမဖွူဖွူဖှေးဖှေးတောငျ့တောငျ့တငျးတငျးကွီးမို့ကိုတိုးကွီး သညျဒျေါအယျနာနဲ့နီးနီးစပျစပျနရေတာကိုရော.. ခဈြစရာစိုပွခြေောမောတဲ့ညီအမ စနိုးနဲ့မိုနာ.. ဖူးဖူးတို့နဲ့ဒှေးရောရှကျတငျနီးစပျစှာနရေတာကော.. စိတျတှေ လှုပျရှားမိ.. ဖေါကျပွနျတဲ့စိတျတှဖွေဈပျေါမိရသညျ. .။ ကိုတိုးကွီး.. အလုပျကဆငျးတော့ညနစေောငျးနပွေီ.. ။မိုးကတနကေုနျ သဲသဲမဲမဲရှာနတောခုထိလရေောမိုးရောသဲနသေညျ. . ။အိမျအပွနျ. .စနိုး မုနျ့မှာလိုကျတာသတိရပွီးအိမျအပွနျလမျးမှာရှိနတေဲ့လာဟော. . ဆိုတဲ့.. ပါကစ်စတနျဆိုငျလေးကိုဝငျပွီးစနိုးမှာလိုကျတဲ့မလိုငျမုနျ့တှဝေငျဝယျသညျ. . ။စနိုး နဲ့မိုနာတို့ညီအမတှနေဲ့သူတအိမျထဲနပွေီးတအားရငျးနှီးသညျ.. ။ဖူးဖူးဆိုတဲ့ တယောကျနဲ့လဲဒီလိုဘဲ.. ။ဖူးဖူးကပုတျလားခတျလား. .ကလိထိုးလိုကျ ဆှဲဆိတျလိုကျအမွဲလုပျတတျသညျ.. ။ မိုနာနဲ့သူသူတို့အားလုံးခကျြစားဖို့စြေးအတူအမွဲထှကျဝယျဖွဈသညျ .. ။နှရောသီမှာမိုနာသညျပေါငျရငျးအထိတိုသောဘောငျးဘီပါးပါးပွတျပွတျလေး ဝတျလရှေိ့သညျ.. ။စြေးဝယျပွီးဘိုကျဆာရငျ.. Roy Rgers ဆိုငျမှာ အတူတူထိုငျစားလရှေိ့ရာမိုနာရဲ့ပေါငျတနျရှညျတှကေိုသူအနီးကပျမွငျရသညျ. .။ ပေါငျဖွူဖွူတှမှောမှေးညငျးစိမျးနုနုလေးတှကေိုတှမွေ့ငျရတာသူ့စိတျတှမေရိုးမရှ ထကွှရသညျ. . ။တကွိမျမှာကိုတိုးကွီးသညျမိုနာ့ပေါငျတနျကိုလကျညှိုးလေးနဲ့ တို့မိသညျ. . ။လကျညှိုးလေးနဲ့ပှတျနမေိသညျ. . ။မိုနာသညျသူ့ကိုစိတျမဆိုး. .။ သူလုပျတာကိုမတား..မရုနျးတဲ့အပွငျ.. တခဈခဈနဲ့သဘောကသြညျ. .။အောကျ နှုတျခမျးဖေါငျးဖေါငျးလေးကိုသှာလေးနဲ့ကိုကျပွီး ယားတယျ. . အကို. . လို့ ပွောသညျ.. ။သူလဲမိုနာ့ပေါငျတှကေိုကားပျေါမှာလဲပှတျမိသညျ..။သမီးရီးစားလဲ မဟုတျ. . ဘာလဲမဟုတျ.. ပေါငျတော့ပှတျပေးနမေိပွီ. .။
တနကေို့တိုးကွီးရုပျရှငျအခှထေိုငျကွညျ့နခေိုကျမိုနာအောကျထပျဆငျးလာသညျ.။ ဟိတျ.. ဘာလုပျနလေဲ. . ဗှီဒီယိုပိတျလိုကျ. .ကိုတိုးကွီး.. မိုနာ့စကားကိုနားထောငျသညျ. . ။ရီမုတျနဲ့ထောကျကနဲတီဗှီကို ပိတျလိုကျသညျ. . ။မိုနာသညျစီဒီစကျဆီလြောကျသှားကာ. . သီခငျြးဖှငျ့လိုကျသညျ . ။ အကို့ကိုကပွမလို့. . ကွညျ့. . သီခငျြးသံစတငျထှကျပျေါလာသညျ. .။ …ဗနငျလာအိုကျဈရဲ့အိုကျဈအိုကျဈဘဘေီဆိုတဲ့သီခငျြး. ကိုတိုးကွီးကဆိုဖါမှာ.. ထိုငျနတေော့မတျတပျရပျနတေဲ့မိုနာရဲ့ဘောငျးဘီ တိုတိုလေးကွောငျ့ပေါငျအရငျးကနစေပွီးဖွူဝငျးနတေဲ့ပေါငျတနျကိုသူ့မကျြနှာ နားကပျပွီးမွငျတှနေ့ရေသညျ..။ တုံတုံတုံ. .. တုံတုံတုံ. .. . အိုကျဈအိုကျဈဘဘေီ.. ဘဘေီ.. တုံတုံတုံ. . တုံတုံတုံ.. တုံ့တုံ. . မိုနာကသညျ.. ။မမှောငျ့တမှောငျအခနျးထဲသူတို့၂ယောကျထဲရှိနသေညျ. .။ အခုအခံမပါတဲ့ဘလောကျဈကွောငျ့ကနတေဲ့မိုနာ့ရငျသားစိုငျတှကေတုနျခါ.. လှုပျနကွေသညျ.. ။ရငျသားထိပျသီးလေးတှကေဘလောကျဈပါးပါးအသားမှာကပျပွီး အရာလေးထငျးနသေညျ.. ။အသဲယားစရာပါလား. . မိုနာရယျ. . .။ ကိုတိုးကွီးစိတျတှအေရမျးလှုပျရှားပွီးလုံခညျြကွားကလီးတနျကွီးဒိုငျးကနဲ မတျမတျတောငျလာရသညျ. .။ ကားကအိမျရှကေို့ရောကျပွီးထိုးဆိုကျလိုကျရတာကွောငျ့ကိုတိုးကွီးရဲ့.. အတှေးမွငျယောငျမှုတှရေပျသှားသညျ.. ။ ကိုတိုးကွီးစနိုးအတှကျမလိုငျမုနျ့ထုပျကလေးဆှဲပွီး.. အိမျထဲပွေးဝငျသညျ.. ။မိုးကသဲနဆေဲ. . ။လကေလဲပွငျးနဆေဲ.. ။
စနိုး. . နငျ့အတှကျမလိုငျမုနျ့ပါတယျ. . စနိုးဘယျရောကျနလေဲ.. ။စနိး… စနိုး. .. ကိုတိုးကွီး. .. စနိုးကိုကွညျ့ရတာအိပျရာထဲကထလာတဲ့ပုံဘဲ.. ။တှနျ့ကနြေတေဲ့ဘလောကျဈ အထဲမှာဘာမှခံဝတျထားပုံမပျေါဘူး. . ။လုံးဝနျးတဲ့ရငျသားတှကေလှုပျတုတျတုတျနဲ့ . ။ထမိနျဟောငျးလေးကလဲနှမျးကနြေသေညျ. .။ စနိုးကအျိပျနတောကိုး. . အိပျပါဘူး. . မိုးအေးလို့စောငျခွုံထဲကှေးနပွေီးဗှီဒီယိုကွညျ့နတော. . စနိုးကမလိုငျမုနျ့သိပျကွိုကျသညျ. .။ ကိုတိုးကွီးယူလာသောမလိုငျတှကေို.. ဖှငျ့နှိုကျနတေုံး.. သူမဖငျအနောကျဖကျထမိနျမှာ အရတှေစေိုကှကျနတောကိုတိုးကွီးတှလေို့ကျသညျ.. ။ကွညျ့ရတာရာစီသှေးတော့ မဟုတျလောကျဘူး. . ။မာစတာဗေးရှငျး.. လကျနဲ့အာသာဖွနေတောဖွဈဖို့မြား သညျ.. ။အိမျမှာဘယျသူမှမရှိခိုကျမို့ကိုတိုးကွီး.. စိတျတှဖေေါကျပွနျမိနသေညျ. .။ စနိုးကမလိုငျမုနျ့တှပေလုပျပလောငျးစားနခြေိနျ. . စနိုးရဲ့စှငျ့ကားပွီး..အနောကျဖကျကို ကော့ကောကျဖုထှကျနတေဲ့ဖငျတှကေိုမသိမသာဖတျကနဲရိုကျလိုကျသညျ..။ ဟိတျ.. ဘာလဲကိုတိုးကွီး. . မလိုငျကွိုကျလို့လားမသိဘူး. . စနိုးဖငျတှကွေီးလာသလိုဘဲ. . အို.. ကိုတိုးကွီးကလဲ. . ကွီးလို့လား. . ကွီးတာပေါ့. . ဒီမှာကွညျ့လေ. . ကိုတိုးကွီးလကျကဖငျတုံးတှကေိုဆုတျကိုငျပွလိုကျသညျ. . ။ အိုး. . စနိုးရငျတှေ တုနျသှားသညျ..။ ဟိတျ.. ဘာလို့ကိုငျတာလဲ. . ဖငျကွီးလို့ပေါ့. . စနိုး က နှုတျခမျးလေးစူပွီး.. ကိုတိုးကွီး လဲ ကွီးတာဘဲ . . မလိုငျခဲတှေ အရမျးစားလို့လား . . လို့ပွောသညျ .. ။
ဘာ . . ငါက ဘာကွီးလို့လဲ . . ဟီး . . ကိုတိုးကွီး က ကွီးတာပေါ့ . . မဲမဲ တုတျတုတျကွီး . . ဘာပွောတယျ . . ကိုတိုးကွီး ရဲ့ ပေါငျကွားက ဟာကွီးလေ .. အကွီးကွီး ဘဲ . . အံမာ.. စနိုး .. ဘယျလိုသိလဲ… ပွောစမျး . . ဘယျတုံးက မွငျလို့လဲ . . ဟိုတနကေ့ ကိုတိုးကွီး ရုပျရှငျကွညျ့ပွီး အိပျပြျောနတော . . အတနျကွီး က မတျမတျကွီး ထောငျနတော တှတေ့ာပေါ့ . . မဖူးဖူး တောငျ တှသေ့ေးတယျ . . ကိုတိုးကွီး က နငျတို့တှကေတော့ စိတျထဲ ဘာဖွဈသှားလဲ . . ရငျတှေ ဘာတှေ ခုနျသှားလား . . လို့ စပျဖွဲဖွဲ နဲ့ မေးသညျ . .။ စနိုးလဲ မလိုငျတှကေို ပလုပျပလောငျးနဲ့ စားရငျး အသဲယားသှားတာပေါ့… . .ကွောကျစရာ ကွီး . . လို့ ပွောသညျ .. ။ စနိုး..လာ.. လာထိုငျစမျး . .ဒီမှာ..ဆိုပွီး.. စနိုးကို လှမျးဆှဲပွီး သူ့ပေါငျပျေါထိုငျစသေညျ ..။ အိ.. ကိုတိုးကွီး . . ဘာကွီး လဲ .. မာမာကွီး . . တောငျနတေဲ့ ကိုတိုးကွီးရဲ့ လီးတနျကွီးပျေါထိုငျမိလို့ စနိုး သူမဖငျအိအိကွီးတှေ ကို ကွှလိုကျသညျ .. ။ ကိုတိုးကွီးဟာကွီး မာထောငျနတေယျ . . အဟိ . . ကိုတိုးကွီး က စနိုးထမပွေးနိုငျအောငျ ဆှဲဖိထားသညျ . . ။ကိုတိုးကွီး ရဲ့ လီးတနျထိပျဖူးကွီး က လုံခညျြ နဲ့ ထမိနျ ကွားက ခံနလေငျ့ကစား.. စနိုးရဲ့ စောကျဖုတျ အကှဲကွောငျးကွီးကို ဖိထိုးမိနသေညျ . . ။စနိုးတအားစိတျလှုပျရှားသှားသညျ . . ။ တကိုယျလုံး..တုနျခါသှားသညျ .. ။ အို.. အို . .. ကိုတိုးကွီး . . ထိုးမိနတေယျ . . ဘာထိုးမိတာလဲ . . ကိုတိုးကွီး ဟာကွီး က စနိုးဟာကို ထိုးနတေယျ . . စနိုးရဲ့ ဘာကို ထိုးမိနတောလဲ . .။
အို . . ပွောခငျြဘူး . . ပွောပါ..ရှကျမနပေါနဲ့ဟာ.. ဘယျသူမှ ကွားတာမှမဟုတျတာ . . စနိုးက မကျြစောငျးလေးထိုးလိုကျပွီး.. စောကျပတျကို.. လို့ပွောလိုကျသညျ . .။ ကိုတိုးကွီးရဲ့ လီးတနျကွီးက ဆတျကနဲဆတျကနဲ သူမ စောကျပတျကို ထိုးနသေညျ . .။ ကငျြကနဲကငျြကနဲ ဖွဈသှားရသညျ . . ။ ကွကျသီးတှလေဲ တအားထရသညျ . .။ ကိုတိုးကွီး . .စနိုး.. စနိုး . .. ဘာဖွဈလဲ . . စိတျတှေ တမြိုးကွီးဘဲကှာ . . လာ.. ဒီစိတျတှေ ပြောကျသှားအောငျ ကိုတိုးကွီး လုပျပေးမယျ . . ကိုတိုးကွီးသညျစနိုးလကျကလေးကိုဆှဲကာသူ့လီးတနျကွီးပျေါအုပျတငျပေးပွီး… . . ဆုတျကိုငျစသေညျ .. ။မာမာနှေးနှေးအတနျကွီးကို ဆုတျကိုငျထားမိရခြိနျ စနိုး ရဲ့ ပေါငျကွားမှာ အရတှေေ တသှငျသှငျစီးဆငျးနပွေီ . ..။ ကွီးလိုကျတာ ကိုတိုးကွီးရယျ . . ပှတျပေး… လကျကလေးနဲ့ ပှတျပေး . . စိတျညှို့ခံထားရတဲ့ လူလို . . စနိုးသညျ သူ ခိုငျးတာကျု နာခံနမေိပွီ . . ။ သူ့ လီးတနျကွီး ကို ဆုတျကိုငျပှတျသပျပေးနမေိသညျ . .. ။တငျမီဆိုတဲ့ ကောငျလေးကို တောငျ စနိုး လီးကိုငျပေးဘူး သညျ .. ။ ကိုတိုးကွီး သညျ သူ့အပျေါ အမွဲ ကောငျးသညျ . . ။ မုနျ့လဲ အမွဲဝယျကြှေးသညျ . . ။ သူ့ကို လုပျပေးခငျြနသေညျ . .။ စနိုး . . ဟငျ . . ဘာလဲ . . အပွာကားကွညျ့ဘူးတယျမှုတျလား . . အငျး . . စုတျတာတှေ တှဘေူ့းတယျမှုတျလား . . အငျး . . ငါ့ကို စုတျပေးပါလားဟငျ . . စနိုးတခါမှ မလုပျဘူးဘူး . . အခု လုပျကွညျ့ပေါ့ . . လာ . . ကိုတိုးကွီး က သူ့ လုံခညျြကို ဖွခေလြိုကျသညျ . . ။ မွှဟေောကျကွီးတကောငျ ပါးပဉျြးထောငျနသေလို မတျမတျတောငျနတေဲ့ လီးမဲမဲကွီး ကို စနိုး တှလေို့ကျရပါတော့ သညျ . .။
ငုံလိုကျ.. စနိုး . . စနိုး လီးတနျကွီး ရဲ့ ထိပျ ကို လြာထိပျ နဲ့ တို့ကွညျ့လိုကျသညျ .. ။ ဒဈပွဲကွီး က .. ကားကားကွီး . . ။ ငုံလိုကျစနိုး . . စနိုးသူခိုငျးတဲ့အတိုငျးငုံလိုကျတော့ငံကြိကြိအရသာကိုရလိုကျသညျ. .။ စုတျ. . စုတျပေး. . စနိုးလဲအပွာကားတှကွေညျ့ဘူးထားတော့အပွာကားထဲကလီးစုတျတာတှေ တှဘေူ့းနပွေီးသားပါ. . ။လီးမဲမဲတုတျတုတျကွီးကိုစုတျပေးနခေိုကျအိမျရှတေံ့ခါးကွီး ခြောကျကနဲဖှငျ့လိုကျသံကွားလိုကျရပါသညျ..။ ဟာ.. မာမီပွနျလာပွီထငျတယျ. . စနိုးတကျတော့မယျ. . စနိုးအိမျအပျေါထပျကိုတကျပွေးသှားပါသညျ. . ။လီးကွီးတောငျရကျနဲ့ကိုတိုးကွီး ကနျြရဈသညျ. .။ ဒျေါအယျနာနဲ့ကိုတိုးကွီးသညျ ဆဖျေ့ဝေး ဆိုတဲ့စူပါမားကကျကွီး မှာလုပျကွသညျ. . ။အတူတူလုပျကွတယျဆိုပမေဲ့.. နရောခငျြးတော့ကှဲသညျ.. ။ ကိုတိုးကွီးကစတိုကိပါ.. ။အနောကျဘကျကစတိုခနျးကွီးထဲမှာလုပျရသညျ.. ။ ပစ်စညျးတှကေုနျကားကွီးတှနေဲ့ရောကျလာရငျလဲသူတို့ဆိုငျကွီးထဲကိုသှငျးယူဖို့ . . နရောခထြားပေးဖို့လုပျရသညျ.. ။ဒျေါအယျနာကတော့သဈသီးတှနေဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို.. တာဝနျယူရသညျ. . ..။ ကိုတိုးကွီးသညျသူ့ရဲ့ထမငျးဒစားခြိနျမှာဆိုငျကွီးရဲ့ခေါငျမိုးပျေါRoof Top ကိုတကျပွီးထမငျးစားတတျသညျ. . ။ခေါငျမိုးပျေါကနပွေီးသူတို့ဆိုငျကွီး ဘေးကတခွားဆိုငျလေးတှဘေကျကိုငေးကွညျ့ရငျးအစားစား..အရသေောကျတတျ သညျ. . . ။ခေါငျမိုးပျေါကိုလူတိုငျးတကျလို့မရပမေဲ့ကိုတိုးကွီးကစတိုကိပါမို့ သော့တှကေိုငျသူဖွဈတာရယျ.. သူကခေါငျမိုးပျေါတကျတကျပွီးရှငျးလငျးရတာတှေ ရှိတာရယျကွောငျ့တကျနိုငျတာဖွဈသညျ.. ။
ကိုတိုးကွီးခေါငျမိုးပျေါတကျတကျပွီး ထမငျးစားတတျမှနျးသိတဲ့ဒျေါအယျနာလဲကိုတိုးကွီးကိုစကားပွောစရာ..ရှိရငျ. . ..ဘယျမှာ ရှာရမလဲသိနသေညျ. . ။ခေါငျမိုးပျေါကိုတကျလိုကျလာလရှေိ့သညျ..။ ဒီနကေို့တိုးကွီးရောဒျေါအယျနာရောညနပေိုငျးလုပျရသညျ. . ။ထမငျးစားခြိနျ ရောကျတော့မှောငျနပွေီ.. ။ခေါငျမိုးပျေါကိုတကျပွီးသူအိမျကလုပျလာတဲ့ ပေါငျမုနျ့ယိုသုတျကိုစားသညျ. . ။ဆိုငျကနဝေယျတဲ့ပကျဆီဘူးကိုဖှငျ့သောကျ သညျ. . ။ကိုတိုးကွီးသညျမနညေ့ကအိမျမှာ..မိုနာနဲ့ဖွဈခဲ့တာကို..ပွနျစဉျးစားမိတော့ သူ့လီးကဒိုငျးကနဲမတျလာသညျ. . ။ မနညေ့ကသူနဲ့မိုနာဘဲအိမျမှာရှိသညျ. . ။ဒျေါအယျနာနဲ့စနိုးတို့တနင်ျဂနှညေမို့ ဘုရားကြောငျးသှားသညျ.. ။ဖူးဖူးကတော့အလုပျရှိလို့သှားသညျ… ။မိုနာက အလုပျမနကျပိုငျးလုပျခဲ့လို့ပငျပနျးတယျဆိုပွီးမလိုကျ။ကိုတိုးကွီးသညျသူနတေဲ့ မွအေောကျထပျမှာစတီရီယိုစီဒီစကျ. . ဒီဗှီဒီစကျ. . တီဗှီ.. အစုံဝယျထားသညျ..။ ဒျေါအယျနာတို့လဲကိုတိုးကွီးဟာတှယေူသုံးနိုငျနတောနဲ့.. အိမျပျေါထပျမှာ ဝယျထားမနတေော့. . ။သူတို့..သီခငျြးဖှငျ့လိုရငျ.. ကာရာအိုကဆေိုခငျြရငျ..ဒီဗှီဒီ ကွညျ့လိုရငျကိုတိုးကွီးဆီ.. ဆငျးသှားပွီးသုံးလရှေိ့သညျ.. ။သတငျးကွညျ့နိုငျရနျ ရိုးရိုးတီဗှီအသေးလေးဘဲအပျေါထပျသူတို့အိပျခနျးထဲထားသညျ. .။ မနညေ့ကမိုနာသညျကိုတိုးကွီးနတေဲ့မွအေောကျထပျမှာရောကျနသေညျ . . ။ကိုတိုးကွီးနဲ့အတူရုပျရှငျထိုငျကွညျ့နတော.. ။နှဈယောကျထိုငျဆိုဖါကွီးမှာ အတူတူထိုငျကွညျ့နကွေသညျ.. ။
ဗှီဒီယိုကစုံထောကျအကျရှငျကားတခုဖွဈပမေဲ့ တျောတျောကွမျးသညျ.. ။နံမညျကွီးသရုပျဆောငျတှနေဲ့ရိုကျထားပမေဲ့.. လိငျဆကျဆံရေးတှကေိုအသားပေးထားသညျ.. ။ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံးတီး ခနျးတှတေငျမက. . လိငျဆကျဆံတာတှကေို.. အသေးစိတျပီပီပွငျပွငျပွသညျ. .။ ကိုတိုးကွီးသညျသူ့နဘေးမှာအတှငျးခံခံဝတျမထားတဲ့တီရှပျပါးပါးနဲ့. . ဘောငျးဘီအတိုလေးဝတျထားးပွီး. . ပေါငျတနျရှညျဖှေးဖှေးနှဈခြောငျးကိုထောငျကာ ရုပျရှငျစိတျဝငျတစားကွညျ့နသေောမိုနာနဲ့အမှောငျခထြားတဲ့အခနျးထဲ.. လိငျအသားပေးရုပျရှငျကိုကွညျ့နရေလို့စိတျတှဖေေါကျပွနျနပေသေညျ. . ။မိုနာသညျ စနိုးထကျပိုပွီးအသားဖှေးဖွူ.. ပွီးပိုလဲခြောသညျလို့ကိုတိုးကွီးထငျသညျ. .။ရုပျရှငျကကွမျးတာအပွငျမိုနာရဲ့ပေါငျတနျတှကေလဲ..လှလှနျးဖှေးလှနျးတာကွောငျ့ကိုတိုးကွီး ပေါငျကွားကလီးတုတျတုတျကွီးဟာမာကြောတောငျမတျနသေညျ. .။ မိုနာမှာလဲကိုတိုးကွီးနညျးတူဘဲစိတျတှထေကွှနသေညျ.. ။အိမျကွီးတခုလုံးသူမ နဲ့ကိုတိုးကွီးဘဲရှိနတေဲ့အပွငျအမှောငျကလဲခထြားသညျ.. ။ရုပျရှငျကလဲ ဘာကွမျးသလဲမမေးနဲ့. . ။ယောကျြားကမိနျးမကိုဆောငျ့တာကိုအနီးကပျတောငျ ပွလိုကျသေးသညျ.. ။အငျး..ကနဲ.. အငျးကနဲ… ဆောငျ့လိုကျတိုငျးအသားခငျြး ဖပျကနဲဖပျကနဲရိုကျခတျတဲ့အသံကတိတျဆိတျနတေဲ့အခနျးထဲ..စိတျလှုပျရှားဖှယျ ဖွဈနသေညျ. .။ ကွမျးတဲ့အခနျးတှပွေီးသှားပွီးအကျရှငျအခနျးတှရေောကျလာတော့… အကို. . ဟငျ.. မိုနာ . . ရုပျရှငျက .. အရမျးဟော့တာဘဲကှာ . . မိုနာ . . စိတျတှေ တမြိုးကွီး ဖွဈလာတယျ . . အကိုရောဘဲ . . တခု ပွောပွလို့ရမလား. ပွောလေ . . ဘာလဲ . . မိုနာလေ.အဲလိုဆကျဈရုပျရှငျတှကွေညျ့ရငျ..မိုနာ့နို့တှကေ..တအားတငျးလာတယျသိလား . ..။
အထူးသဖွငျ့ နို့သီးလေးတှေ .. မာတောငျပွီး တငျးမာလှနျးလို့ .. မကိုငျဘဲ မနနေိုငျဘူး . . ခပြှေတျမိရတယျ . . ဟေ.. ဟုတျလား . . အကို စမျးကွညျ့ပါလား . .လာ.. အကို့လကျ ပေး . . မိုနာက သူမ နို့သီးလေးတှေ မာတောငျနတော စမျးခိုငျးတော့ ကိုတိုးကွီး တုနျရီတဲ့ လကျတှေ နဲ့ စမျးလိုကျမိသညျ .. ။ အေး..ဟုတျတယျ.. မိုနာ . .အို . .မာတောငျနတောဘဲ.. အကို ခပြှေတျပေးရမလား . . အငျး . . မိုနာ့ နို့သီးဖုလေးတှေ ကို တီရှပျ အပျေါကဘဲ သူ လကျမနဲ့ လကျညှိုးသုံးပွီး ဖှဖှလေးခနြေယျပေးနသေညျ . .။ နဲနဲ သကျသာလား . . မိုနာ ညညျးသညျ .. ။ အငျး..အငျ….အငျး… မိုနာ့ ကိုယျတခွားနရောတှမှောရော . . ဘာဖွဈသေးလဲ . . ဖွဈတယျ . . ဘာဖွဈလဲ . . ဘယျနရောမှာလဲ . . ပွောမထှကျဘူး.. ရှကျတယျ . . ပွောပါ မိုနာရယျ . . ဒို့ ၂ယောကျထဲရှိတာဘဲ . . ရှကျမနပေါနဲ့ . . ကိုတိုးကွီး က မိုနာ့ နို့သီးလေးတှသောမက လဲ နို့တခုလုံးကိုလဲ ခပျဖှဖှ ဆုတျနယျပေးနသေညျ ။ မိုနာလဲ ကိုတိုးကွီး ရဲ့ နားနားကို ကပျပွီး တိုးတိုးလေး ပွောလိုကျသညျ . .။ စောကျပတျ . . စောကျပတျမှာ ဖွဈနတေယျ . . ဘာဖွဈနလေဲ မိုနာ . . ယားတယျ..အရမျး.. ယားနတေယျ. . စိုရောစိုလား. . အငျး. .တအား.. စိုနတေယျ. . သကျသာအောငျအကိုလုပျပေးရမလား. . အကိုကဘယျလိုလုပျမှာလဲလို့. . အကိုနမျးပေးမယျလေ. . ရှကျစရာကွီး. . အကို. မိုနာရှကျတယျ. . မရှကျနဲ့..မှောငျနတောဘဲ.. နောကျပွီးဒို့၂ယောကျထဲ. . အကိုဘယျသူ့ကိုမှမပွောနဲ့နျော. . အငျး. . မပွောဘူး. . ကိုတိုးကွီးလဲကာမစိတျ.. အရမျးကွှနပွေီဖွဈတဲ့မိုနာ့ကိုဆိုဖါပျေါလှဲခလြိုကျပွီး. နဂိုထဲကလြော့ရဲရဲဖွဈနတေဲ့အိမျနရေငျးဝတျထမိနျလေးကို..ဆှဲခြှတျလိုကျပွီး..ပေါငျဖွူဖွူနှဈ ခြောငျးကွားကိုခေါငျးထိုးသှငျးလိုကျသညျ. .။
မိုနာ့စောကျဖုတျသညျအရတှေတေအားစိုရှဲနသေညျ. . ။ကိုတိုးကွီးရတဲ့ အခှငျ့အရေးကိုလကျလှတျမခံဘူး. . ။မိုနာ့စောကျဖုတျအကှဲကွောငျးကိုပထမဆုံး အောကျကနအေထကျကိုပငျ့ပွီးကျောတငျယကျလိုကျသညျ. .။ အ…အ….အာ… အကိုရယျ. . .အို… အကိုရယျ. .. .. . ကိုတိုးကွီးရဲ့လြာကအပွားလိုကျကွီး မိုနာ့စောကျပတျနှုတျခမျးနှဈမှာကွားကိုဖိပှတျယကျတငျကာလြာထိပျက စောကျစိလေးကိုခလုပျတိုကျသှားသညျ. . ။မိုနာ. . တကိုယျလုံးတုနျခါသှားရသညျ။မကျြလုံးလေးမှေးစငျးကာ.. ခါးလေးကော့တကျသှားသညျ.. ။မိုနာ့ခါးသိမျသိမျလေးကို ဘယျလကျနဲ့ဆှဲကိုငျညာလကျကမိုနာ့နို့တလုံးကိုမမှီမကမျးလှမျးဆုတျကိုငျပွီး ကိုတိုးကွီးဆကျတိုကျအပျေါအောကျစုံခြီဆနျခြီလကျြပေးပါတော့သညျ. .။ အ..အ…အ….အ….အို..အို….အို…အို……….အို………. ဟငျ့ဟငျ့… အကို. . . မိုနာမှာ. . စောကျပတျယားတဲ့ဝဒေနာကိုရရနတောကွာပွီ. . ။ကိုတိုးကွီးနဲ့သူမ အတူတူပူးပူးတှဲတှဲအမွဲသှားလာနတေဲ့အခြိနျ. စိတျတှအေမွဲနိုးကွှ ဖေါကျပွနျခဲ့ရတာ.. အခုတော့ကိုတိုးကွီးသညျသူမပေါငျကွားထဲခေါငျးကွီး ရောကျနပွေီ.. ။ယကျနပွေီ..။ ကိုတိုးကွီးသညျမိုနာ့စောကျပတျကဘာမှမကောငျးတဲ့အနံ့အသကျမရ..။ ဆပျပွာနံ့သငျးသငျးလေးသာရနသေညျ.. ။ မိုနာ့ဆန်ဒတှပွေညျ့ဝသှားသညျ. . ။မကျြလုံးကိုစုံမှိတျခါအကို့အယကျကို ခံပဈနသေညျ.. ။အကိုတိုးကွီးသညျတကယျအယကျတျောသညျ. . ။နောကျကရြငျ . . အကို့ကို ဘာဂြာတိုးကွီး လို့စပွီးနောကျပွီး.. ချေါဦးမညျ. .။ အို. . အို့. .ဟ… မိုနာထှနျ့ထှနျ့လူးသှားရသညျ. . ။ကိုတိုးကွီးရဲ့လြာကွီးရဲ့ထိပျကမိုနာ့.. စောကျပတျအတှငျးထဲကိုအတငျးတိုးဝငျပွီးမှနှေောကျလာလို့ပါ. . ။
ကောငျးလားဟငျ.. မိုနာ. . အငျး..အငျး.. ကောငျးတယျ. .သိပျ.. သိပျကောငျးတယျ. . အရမျးကောငျးနတေုံးဗွုံးကနဲအကိုရပျလိုကျသညျ.. ။ဟငျ..ဘာ…ဘာလို့ ရပျလိုကျတာလဲ. . ကောငျးနဆေဲရပျလိုကျလို့ဖီလငျပယျြသှားသညျ..။ ကိုတိုးကွီးသညျဆိုဖါကွီးပျေါကဆငျးလိုကျသညျ.. ။ပကျလကျလေးလှဲနတေဲ့ မိုနာ့ဘေးနားမှာလာရပျလိုကျပွီး.. ကိုတိုးကွီးသညျခါးကလုံခညျြကိုကှငျးလုံးပုံ.. ခြှတျခပြဈလိုကျသညျ. .။ ဟယျတော့. .မိုနာ.. တုနျလှုပျသှားသညျ.. ။ ကိုတိုးကွီးရဲ့လီးတနျမဲမဲကွီးကိုအနီးကပျတှမွေ့ငျလိုကျရလို့ဘဲ. . ။ဒါ…ပထမဆုံး.. အကို့လီးကိုတှဘေူ့းရတာပါ. . ။တအိမျထဲနိးနီးစပျစပျနကွေတော့. .အကို လီးတောငျတာကိုတော့ခဏခဏမွငျဘူးခဲ့သညျ.. ။လုံခညျြဝတျထားရကျလုံခညျြ အောကျကထောငျထတာကိုဘဲ.. မွငျဘူးတာပါ. .။အကွီးကွီးဘဲအကို. . ကိုတိုးကွီးကသူ့လီးတုတျတုတျကွီးကိုမိုနာ့မကျြနှာနားတိုးကပျပေးလိုကျသညျ..။ မိုနာသညျအပွာဇာတျကားတှကေိုနယျစပျမှာနကေထဲကကွညျ့ဘူးသူဖွဈသညျ. .။ အကိုဘာလို့သူ့လီးကွီးသူမပါးစပျနား..တိုးကပျပေးသလဲ..ဆိုတာ.သဘောပေါကျပါသညျ . . ။အကိုသညျမိုနာ့ကိုလီးစုတျစခေငျြလို့ဆိုတာသိသညျ. .။ တခါမှစုတျဖူးဘူး. . စမျးစုတျကွညျ့မိုနာ. . အကို့ကိုကောငျးအောငျလုပျပေးခငျြတယျမှုတျလားဟငျ. . မိုနာခေါငျးလေးညှိမျ့သညျ..။ အငျး. . မိုနာသညျကိုတိုးကွီးရဲ့လီးကွီးကိုလကျကလေးနဲ့မရဲတရဲဆုတျကိုငျလိုကျသညျ. .။ ပွီးတော့ပါးစပျနဲ့ဖမျးငုံလိုကျသညျ. . ။ပူနှေးနတေဲ့လီးကွီးရဲ့ဒဈလုံးကားကားကွီးကို အသာ.. စုတျကွညျ့လိုကျသညျ. .။ အိုး. . အငျး. .စုတျ.. စုတျ. . လီးကွီးထိပျကလြံကနြတေဲ့အရကွေညျတှကေငံကြိကြိ.. နဲ့. ..။ ကိုတိုးကွီးကသူလိုခငျြတဲ့ပုံစံကိုပွောပွသညျ. . ။သငျပေးသညျ. . ။
မိုနာပထမဆုံး လီးစုတျဘူးခွငျး…။ အငျးဟငျး. . ကောငျးတယျ. . ကောငျးတယျ. .စုတျ.. စုတျ. . . တခကျြတခကျြ.. ပွှတျပွှတျ. . နဲ့မွညျသညျ. .။ ကိုတိုးကွီးအရမျးကောငျးလာပွီး.. မိုနာ့ကိုသူလိုးခငျြတာကွောငျ့..ပွီးလိုကျလို့.. မဖွဈသေးဘူးဆိုပွီး.. စိတျကိုထိနျးနဆေဲ. . ခြောကျကနဲအိမျထဲတံခါးဖှငျ့ဝငျလာတဲ့ အသံကွားလိုကျရတာကွောငျ့.. မိုနာ့ပါးစပျထဲရောကျနတေဲ့သူ့လီးတနျကွီးကို ဆှဲထုတျလိုကျရသညျ. .။ ဟေ့.. ဘယျသူရှိကွလဲ. . မိုနာ. . ကိုတိုးကွီး. .. ဖူးဖူးရဲ့အသံ. .။ မိုနာကအသံပွနျပွုလိုကျသညျ. .။ ဖူးဖူး.. ပွနျလာပွီလား. . မိုနာတို့အောကျထပျမှာ. .. . မိုနာ. . ငါ. . ကွကျသားကွျောတှပေါလာတယျ. . လာစား. . ကိုတိုးကွီးရော. . ကိုတိုးကွီးနဲ့မိုနာအဝတျအစားတှပွေနျဝတျကွသညျ. .။ ကိုတိုးကွီးသညျသူ့ထမငျးစားခြိနျမှာဆိုငျကွီးရဲ့ခေါငျမိုးပျေါမှာပါလာတာတှေ စားရငျး. . မနညေ့ကမိုနာနဲ့ညိစှနျးကွတာတှကေိုပွနျလညျမွငျယောငျနပွေီး ဘောငျးဘီအောကျကလီးတနျကွီးကမတျမတျတောငျနသေညျ.. ။ ကိုတိုး. . . အနောကျကလှမျးပုတျပွီးချေါလိုကျသံကွောငျ့လနျ့သှားသညျ. .။ ဒျေါအယျနာ. .။ ဟာ.. အနျတီ. . ကိုတိုး. . အနျတီအရေးတကွီးပွောစရာရှိလို့. . ကိုတိုးကွီးဒိတျကနဲစိတျပူသှားသညျ. . ။မိုနာနဲ့သူ့အကွောငျးမြား. .ဒျေါအယျနာ သိသှားပွီလား။သူဒျေါအယျနာ့မကျြနှာကိုအကဲခတျလိုကျသညျ. .။ ဒျေါအယျနာကသူ့လကျတဖကျကိုဖမျးဆုတျကိုငျလိုကျပွီး. . ကိုတိုး. .အနျတီ အကူအညီတခုလိုနတေယျကှာ.. ကူညီအုံး. . လို့ပွောသညျ. ..။
အငျး..ပွောလေ.. အနျတီ. . ဘာလိုလဲ. . ဒီလို. . ကိုတိုးရာ.. အနျတီ့ညီမလငျမယားလေ. . ဖါးအံမှာ. .လမေုနျတိုငျးကွောငျ့.. အိမျခေါငျမိုးလနျသှားတယျတဲ့. . အနျတီ့ဆီစာရောကျတယျ. .အဲဒါ.. အနျတီ.သူတို့ဆီကို ငှပေို့ခငျြတယျ. . သိတဲ့အတိုငျးဘဲ. . အနျတီလဲသမီးတှအေတှကျအဝတျအစား ဝယျခွမျးပေးလိုကျတာနဲ့ငှမေပိုဘူး. . ကိုတိုးခဏလှညျ့ပါအုံး. . ရတယျအနျတီ. . ဘယျလောကျလိုလဲ. .. ရှဈရာ. . ရတယျလေ. . အနျတီဘယျတော့လိုလဲ. . . . ဒီညကနြျောတို့အလုပျကပွနျရငျ.. ပေးမယျလေ. . ATM က၃၀၀ အမြားဆုံး.. ဘဲထုတျလို့ရတယျဆို. . ကနြျောအိမျမှာသိမျးထားတာရှိပါသေးတယျ. . ကြေးဇူးတငျလိုကျတာကိုတိုးရယျ. . အားကိုးပါတယျ. . ကှာ. . ဒျေါအယျနာကကိုတိုးကွီးကိုဖကျလိုကျသညျ. . ။ကိုယျခငျြးပူးကပျသှားတာကွောငျ့ ကိုတိုးကွီးရဲ့ပေါငျကွားကအတနျမာမာတောငျ့တောငျ့ကွီး. . ဒျေါအယျနာရဲ့ ပေါငျကွားကဆီးခုံကွီးကိုဖိကပျထောကျမိသှားသညျ..။ ကိုတိုးကွီးကလဲသူမဖကျသလိုပွနျဖကျလိုကျတော့သူ့လကျဖဝါးတှကေ ဒျေါအယျနာ့ဖငျအိအိကွီးတှကေိုကိုငျတှယျမိရကျသားကွီးဖွဈသှားသညျ. .။ အသားခပျပြော့ပြော့အနကျရောငျဘောငျးဘီဝတျထားတဲ့ဒျေါအယျနာရဲ့ ဖငျကားကားကွီးတှကေိုကိုငျထားမိတော့သူ့လီးကဆတျကနဲဆတျကနဲ..လှုပျသှား သညျ။ဒျေါအယျနာကဖကျထားတာကိုပွနျမခှါ. . ။ ကိုတိုး. . လို့ခပျတိုးတိုးချေါသညျ..။ အနျတီ. . ကြေးဇူးတငျတယျကှာ . . အရမျးဘဲ . . သိလား . . ရပါတယျ . . အနျတီ . . ဒျေါအယျနာ သညျ ကိုတိုးကွီး ပုခုံးပျေါ ခေါငျးတငျမှီထားပွီး ကြောပွငျကို ဖှဖှလေး ပှတျပေးနသေညျ . . ။
ကိုယျအောကျပိုငျးမှာတော့ ကိုတိုးကွီး ရဲ့ လီးမာမာကွီး က သူမ ပေါငျကွားကို တနျးနအေောငျဘဲ ဖိကပျမိနသေညျ . .။ ကိုတိုး . . ဗြာ .. အနျတီ . . တခု ပွောလို့ ရမလား . . ပွောပါ အနျတီ . . ကိုတိုးကွီး သူ့ လကျဖဝါးထဲ ရောကျနတေဲ့ ဖငျတုံးကွီးတှေ ကိုအုပျပွီး..ကိုငျပှတျမိနသေညျ . ။ အနျတီ လေ . . ယောကျြားဆုံးပွီးကထဲက .. ယောကငြ်ျားနဲ့ ကငျးကှာနခေဲ့တယျကှာ . . သိပျ အထီးကနျြဆနျခဲ့တာဘဲ . . တခါတခါ နလေို့တောငျ မကောငျးဘူး . . သူ့ ကြောပွငျကို ဒျေါအယျနာ ပှတျနသေညျ . . ။ တငျးတငျးကွီး ဆကျ ဖကျထားနဆေဲ . .။ အောကျဖကျမှာ လီးကွီး က ဖိကပျထားနဆေဲ . .။အဲဒါ . . ဟိုလေ . . ကိုတိုး နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး . . တနရောရာ မှာ တှခေ့ငျြတယျကှာ .. အနျတီ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဘဲ ပွောပါရစတေော့ . . အိမျမှာ က သမီးတှနေဲ့ ဖူးဖူး နဲ့ .. ဆိုတော့ . မလှတျလပျဘူးကှယျ .. .. ကနြျော သဘောပေါကျပွီ . . အနျတီ . အနျတီ လိုအပျနတောတှေ အားလုံး ကနြျော တာဝနျယူပွီး ဖွညျ့ဆညျးပေးမယျ . .. ကောငျးပွီလေ . . ထမငျးစားခြိနျလဲ ပွီးနပွေီ.. ညအပွနျ ကမြှ ဆကျ ပွောကွမယျနျော . . ဟုတျကဲ့ အနျတီ . . ကိုတိုးကွီး အလုပျခှငျ ပွနျဝငျရပမေဲ့.. စောစောက ဒျေါအယျနာ့ဖငျတှကေို ဆုတျကိုငျခဲ့ရတာကို ကနြေပျနသေညျ . . ။ အလုပျဆငျးရငျ ဒျေါအယျနာ့ကို တနရော ချေါသှားပွီး သူမ ကွာရှညျစှာ ပွတျလပျနရေတဲ့ လီး အရသာ ကို ပီပီပွငျပွငျ ပေးလိုကျမညျ လို့ စဉျးစားနသေညျ . .။ အလုပျဆငျးလို့ အတူတူ အိမျပွနျကွသောအခါ .. ကိုတိုးကွီး သညျ အိမျတနျးမပွနျဘဲ .. ဒျေါအယျနာကို စြေးပေါတဲ့ မိုတယျ တခု ကို ချေါသှားပါ သညျ .. ။ ဒျေါအယျနာ က သူ .. အိုဗာတိုငျ ဆငျးရ သညျ လို့ သမီးတှေ ကို ဆိုငျမှာကထဲက ဖုနျးဆကျထားလိုကျ သညျ ။
မိုတယျအခနျးထဲဝငျတယျဆိုတာနဲ့ဒျေါအယျနာသညျအငမျးမရဘဲသူ့ နှုတျခမျးတှကေိုစုတျနမျးတော့သညျ.. ။နှဈယောကျသားကုတငျပျေါကိုလဲကသြှားကွရ သညျ.. ။နှဈယောကျသားပွိုငျတူလိုဘဲကိုယျပျေါကအဝတျအစားတှကေိုအမွနျဘဲ ခြှတျခှါကွသညျ..။ ဒီလိုဖွဈတာကိုတိုးနုတျလုံပါစနေျော. . ဘယျသူ့ကိုမှမပွောနဲ့ကှာ. . စိတျခပြါ.. အနျတီ. . ဒျေါအယျနာသညျအဝတျအစားလုံးဝ မရှိတော့သောအခါ. . ဖွူဝငျးတောငျ့တငျးဆဲ ကိုယျလုံးတှကွေောငျ့သူ့စိတျတှကေိုဟုနျးကနဲထကွှစတေော့.. ကိုတိုးကွီးလဲ ဆူဖွိုးတငျးမာဆဲနို့ကွီးတှကေိုအငမျးမရဘဲစို့ပါတော့သညျ. .။ဒျေါအယျနာ့ ဖငျတုံးကွီးတှကေိုသူဆုတျနယျသညျ.. ။ဒျေါအယျနာသညျလဲကိုတိုးကွီးရဲ့ တုတျခိုငျတဲ့လီးမဲမဲကွီးကိုတအံ့တသွကွညျ့ပွီး.. မရှကျနိုငျတော့ဘဲ..ဆုတျကိုငျ ဖဈြညှဈနသေညျ. . ။ အို.. ကောငျးလိုကျတဲ့ဟာကွီးကှယျ. .ဆိုငျခေါငျမိုးပျေါထဲက အနျတီ.. သတိထားမိတယျ. .. မာတောငျနတောကွီး. . ဟငျး. . ဒါအနျတီ့အတှကျ.. အနျတီစိတျကွိုကျဖွဈအောငျကနြျောလိုးပေးမှာ. . ကိုတိုးကွီးကလိုးပေးမှာလို့ပွောလိုကျသံကွားရတာကွောငျ့ဒျေါအယျနာ ကွကျသီးတှဖေနျြးကနဲထသှားရသညျ. . ။လီးနဲ့ကငျးဝေး.. ကငျးကှာနတော… အရမျးကွာနပွေီ. .။ လီးကွီးကိုတငျးတငျးဆုတျကိုငျနသေညျ.. ။ဟှနျး. .. စံခြိနျမှီလီးကွီးပါလား. .။တဏှာအရှိနျကွောငျ့လားမသိ.. ။
လီးတနျကွီးသညျပူနှေးနသေညျ..။ ကိုတိုးကွီးကဒျေါအယျနာ့ကိုကုတငျစောငျးမှာပကျလကျလှနျလှဲအိပျစလေိုကျပွီးသူမ ပေါငျဖှေးဖှေးဖွူဖွူကွီးတှကေိုဖွဲကားလိုကျပွီး. . ဒူးထောကျထိုငျခကြာ..ဖေါငျးခုံးနတေဲ့ စောကျပတျကွီးကိုစပွီးနမျးပါတော့သညျ. .။ ကိုတိုး. . ကိုတိုး. .. ဘာတှလေုပျနတောလဲ. . အို. .. မငျး..မငျး….စောကျပတျ.. စောကျပတျကိုယကျမလို့လား. . . အိုကှယျ. . မငျးမို့မရှံမရှာ. . ဟနျလုပျခါပွောသာပွောနရေသညျ. . ။စောကျပတျအယကျခံကွညျ့ခငျြနတော ကွာပါပွီ. . ။သှားလသေူလငျကွီးကလဲလူရိုးကွီးလေ. . ။ထမိနျလှနျပွီး… တကျဆောငျ့တာဘဲသူနားလညျတာ. . စောကျပတျယကျမပေးဘူးဘူး. .. ။ကိုတိုးကွီး.. ဒျေါအယျနာရဲ့စောကျပတျကွီးကိုအားရပါးရယကျပါပွီ. .. ။ကိုတိုးကွီးရဲ့လြာကွီးက အပွားလိုကျကွီးဖိကာဖိကာယကျပေးနသေညျ. . ။ကိုတိုးကွီးရဲ့လကျတှကေ ဒျေါအယျနာရဲ့ဖငျအောကျကိုသှငျးကာဖငျတုံးတှကေိုဆုတျကိုငျလိုကျသညျ. .။ တပွတျပွတျယကျနရောကဒျေါအယျနာ့စောကျစိကိုပှကျကနဲစုတျပေးလိုကျပွနျသညျ။ အို.. ဟငျ့. . ဒျေါအယျနာဖငျကွီးတှမွေောကျတကျသှားရသညျ.. ။အရသာဖူး..စောကျစိကို အစုတျခံရတာဘယျလောကျအရသာထူးသှားသလဲဆိုတာ..မပွောပွနိုငျလောကျအောငျပါဘဲ .. ။ကိုတိုးရယျ. .. အနျတီ့ကိုနှိပျစကျနတောလား. .တျော..တျော… တျောတော့. . ကိုတိုးကွီးကစောကျပတျကမကျြနှာခှါလိုကျပွီးမော့ကွညျ့သညျ. .။ လုပျတော့. . အနျတီ့ကိုလုပျပေးတော့. . . ကိုတိုးကွီးကပွုံးစိစိနဲ့ ဘာလုပျရမှာလဲ. . လို့ပွနျမေးသညျ..။ ဒျေါအယျနာမကျြစောငျးလေးထိုးလိုကျသညျ. .။
လိုးပေး…. မငျးရဲ့လီးတနျကွီးနဲ့အနျတီ့အဖုတျထဲကိုလိုးဆောငျ့ပေး. .ကဲ သိပလား. . ကိုတိုးကွီးကပကျလကျအိပျနသေောဒျေါအယျနာအပျေါကတကျမှောကျပွီး လှကွေီးထိုးပုံစံနဲ့ဘဲ…စပွီးလိုးလသေညျ..ဒျေါအယျနာရဲ့..စောကျပတျမှာ..မလိုးတာကွာလို့.. စထညျ့ထညျ့ခငျြးမှာအရတှေစေိုရှဲနသေညျ့တိုငျကပျြနသေညျ. .။ နှဈပေါငျးတျောတျောကွာမှပွတျလပျနတေဲ့လီးနဲ့ပွနျအလိုးခံရတာမို့ဒျေါအယျနာမှာ တဆတျဆတျတုနျရငျနသေညျ. .။ ဖွေးဖွေး.. ကိုတိုး. . နာတယျ. . ကိုတိုးကွီးရဲ့လီးကတုတျလှသညျ. .။ဒျေါအယျနာရဲ့..စောကျပတျထဲ.. .. တဈဆို့နလေောကျအောငျ.. တုတျသညျ. .။ကိုတိုးကွီး ကသိပျတော့ညှာမနေ.. ။သူသိသညျ. . ။မလိုးတာကွာနလေို့စလိုးလိုးခငျြးမို့ ဖွဈတာပါ.. ။နောကျကရြငျအဆငျပွမှောဆိုတာသိသညျ. .။ ဒျေါအယျနာမှာကောငျးလှတဲ့လိုးဆောငျ့ပေးခကျြတှကွေောငျ့မကျြရတှေတေောငျ လညျလာရသညျ. . ။ကိုတိုးကွီးကဒျေါအယျနာလိုတောငျ့တောငျ့ဆျောကွီးကို ဘယျလိုလိုးပေးရမယျဆိုတာသိသညျ. .။ ကိုတိုးကွီးလိုးပေးတာကိုဒျေါအယျနာစှဲသှားရသညျ. .။ ကိုတိုးရယျ. . သူသိပျလုပျတတျပါလား. . လို့အောကျကနပွေနျပငျ့ပငျ့ပေးရငျး ပွောလိုကျသညျ.. ။ ကောငျးလား. . အနျတီ. . အရမျးအရမျးကောငျးတယျကှာ. . ဒျေါအယျနာပေါငျတှကေိုအစှမျးကုနျ ဖွဲကားပေးထားသလိုအောကျကနတေအားကော့ပေးသညျ. . ။ဖငျကွီးတှကေို မှရေ့မျးပေးသညျ။ကိုတိုးကွီးအသားကုနျဆောငျ့ဆောငျ့လိုးပေးသညျ. .။ အရတှေတေအားစိုနရှေဲနတောကွောငျ့လိုးဆောငျ့လိုကျတိုငျး. .ဘှတျ..ဘှတျ..ဖှတျ..ဖပျ ဆိုတဲ့အသံတှညေံနသေညျ. .။
အို..အား… အား. . အား. .. ကောငျးတယျ. .ဆောငျ့.. ဆောငျ့. . . တအားဆောငျ့ပေး. ဆောငျ့ပေးတာကတော့တကယျပီပီပွငျပွငျဘဲ. .။ ဆောငျ့.. ဆောငျ့..အို…ကောငျး.. ကောငျး. .အဟာ…အား……. အငျး. . ကိုတိုးကွီးရောဒျေါအယျနာရောပွိုငျတူ. . ပွီးသှားကွရသညျ. .။ ဒျေါအယျနာကကိုတိုးကွီးကြောပွငျကိုတအားဆှဲဖကျထားသညျ. . ။ မထုတျနဲ့ . . မထုတျနဲ့. .တဆုံးထညျ့ထားပါအုံး..ကိုတိုး.. ကိုတိုးကွီးကနောကျထပျလိုးလငျြသေးပမေဲ့ဒျေါအယျနာကအိမျပွနျသိပျ နောကျကနြမှောမို့နောကျတခါမှကှာ.. ဆိုပွီး. . ပွနျကွဖို့ပွောလသေညျ. . ။ကားပျေါမှာ ဒျေါအယျနာသညျကိုတိုးကွီးပုခုံးပျေါမှာခေါငျးလေးမှီကာ.. စောစောကလိုးခဲ့ရတာကို ပွနျတှေးပွီးပီတိတှဖွေဈနသေညျ.. ။ အိမျမှာလဲဘယျသူမှမရှိရငျကိုတိုးနဲ့တှကွေ့မယျ.. သိလား. . အနျတီလိုခငျြရငျချေါလိုကျဗြာ.. အနျတီ့ကိုကနြျောစိတျကွိုကျလိုးပေးမယျ. . ကိုတိုးကွီးသညျဒျေါအယျနာကိုကောငျးကောငျးလိုးပေးခဲ့ရတာတျောတျောဘဲ ကနြေပျနသေညျ..။ နောကျနမှေ့ာမနကျအစောကွီးကိုတိုးကွီး…အိပျပြျောနခေိုကျ… ဒျေါအယျနာသညျ.. အိပျရာထဲမှာမနကေ့အလိုးခံခဲ့ရတာကိုပွနျသတိရပွီးစိတျတှထေလာရပွနျသညျ. .။ သမီးတှအေိပျနဆေဲအခြိနျမို့အသာ.. ခွဖေေါ့နငျးကာမွအေောကျထပျဘစျေ့မငျ့ကို ဆငျးသှားလိုကျသညျ..။ဒျေါအယျနာရဲ့စောကျဖုတျကွီးသညျအထဲကလှိုကျပွီးယားနသေညျ. .။ ခံခငျြစိတျတှကေတားဆီးလို့မရနိုငျ.. ။
ထိနျးလို့မရတော့. . ။အရမျးခံခငျြနပွေီ. .။ ကိုတိုးကွီးသညျလီးကွီးပျေါပွီးအိပျပြျောနသေညျ. . ။အမှောငျထဲမှာဘဲဒျေါအယျနာက ကိုတိုးကွီးရဲ့လီးကွီးကိုစမျးလိုကျသညျ. .။အို…တောငျနလေိုကျတာ.. မာမာကွီး. .။ ဒျေါအယျနာအခြိနျဆှဲမနတေော့. . ။ကိုတိုးကွီးအပျေါကိုတကျခှထိုငျလိုကျသညျ..။ ဟငျ.. ဘယျသူလဲ.. အို.. အနျတီ. . ကိုတိုး. . အနျတီအိပျလို့မရဘူးကှယျ. . အရမျးလိုခငျြလာတယျ. .အရမျးယားနတေယျ .. ဒါကွောငျ့ဆငျးလာတာ. . လိုးရအောငျကှယျ. . ဒျေါအယျနာအိပျခငျြမူးတူးဖွဈနဆေဲကိုတိုးကွီးရဲ့လီးတနျကွီးကိုဖမျးဆှဲကာသူမ စောကျပတျပေါကျမှာတလေို့ကျသညျ.. ။ပွီးတော့ဖွေးဖွေးဖိထိုငျခသြညျ. .။ အရတှေစေိုစိုရှဲနတေဲ့စောကျပတျထဲဗြိကနဲစှပျမိသှားသညျ.. ။အငျး. . နဲတဲ့လီးကွီး မဟုတျဘူး..။ဒျေါအယျနာ.. စှဲနရေပွီ. .။ ဆကျပွီးထိနျးပွီးဖိခသြညျ. . ။တငျးကနဲ.. ထိထိမိမိကွီးလီးကွီးတဆုံးဝငျသှားသညျ..။ အီး… ရှီး. .. ဒျေါအယျနာ.. ဖငျကိုအသာပွနျကွှပွီးအသာထိနျးကာပွနျထိုငျခသြညျ. . ။ အငျး. .ဟငျး ကောငျးလိုကျတာကှာ. . လီးကွီးသညျစောကျပတျထဲအပွညျ့အသိပျကွီးကပျြကပျြကွီး ဖွဈနသေညျ. . ။ကိုတိုးကွီးလဲဒျေါအယျနာကိုအောကျကနစေပွီးပငျ့ပေးလာသညျ. .။ သူမဖငျကွီးတှကေိုဆုတျကိုငျပွီးမလိုကျဆှဲဖိလိုကျလုပျပေးသညျ.. ။စောကျပတျနဲ့ လီးဝငျထှကျပှတျတိုကျမှုကနှဈဦးစလုံးကိုကောငျးလှနျးစတေဲ့ကာမအရသာတှေ ပေးနပွေီ။ဘှတျ…ဘှပျ..ဘှတျ.. …ဘှပျ.. ဗြိ. . . အရှိနျရလာသညျ.. ။ဒျေါအယျနာတအားဆောငျ့နပွေီ.. ။အောကျကလဲကိုတိုးကွီးက ပငျ့လိုးပေးသညျ.. ။
သညျအခြိနျမှာ… ရငေတျလို့နိုးလာတဲ့ဖူးဖူးသညျမီးဖိုထဲ ရဆေငျးသောကျတုံးမွအေောကျခနျးထဲကတအငျးအငျး.. အသံတှနေဲ့ဖှတျဖပျဘှတျဘပျ လိငျဆကျဆံတဲ့အသံတှကွေားလိုကျရတာကွောငျ့ကိုတိုးကွီးနဲ့မိုနာတို့တော့ လိုးနကွေပွီဆိုပွီး… ခြောငျးကွညျ့လိုတာကွောငျ့လှခေါးကခွဖေေါ့နငျးကာ… ဆငျးသှားလသေညျ.. ။သညျအခြိနျမှာလိုးနကွေသူဒျေါအယျနာနဲ့ကိုတိုးကွီးတို့မှာ ကာမဇောကပျနကွေတဲ့သူတှမေို့.. ဖူးဖူးဆငျးလာတာကိုလုံးဝ သတိမထားမိဘဲ . . သူတို့ပနျးတိုငျကိုရောကျရှိဖို့ကိုဘဲအာရုံထားနကွေသညျ. .။ ဖူဖူးမှာအမှောငျထဲမကျြစိကငျြ့သားမရသေးလို့ကုတငျပျေါလိုးနကွေတဲ့သူတှသော ဘယျသူဆိုတာပထမသတိမထားမိသေးပါဘူး..။ သူမထငျတာကမိုနာနဲ့ကိုတိုးကွီးဘဲလို့ထငျနသေညျ. . ။လိုးနကွေသူတှလေဲ တဖွေးဖွေးနဲ့အရှိနျမွငျ့လာကွသညျ.. ။ကိုတိုးကွီးလဲအောကျကနရေတာ အားမလိုအားမရဖွဈလာသညျ.. ။ အနျတီ. . ကနြျောအပျေါကလိုးပေးတော့မယျ. . လို့ပွောလိုကျသညျ.. ။ ခြောငျးနသေောဖူးဖူးလဲကိုတိုးကွီးစကားသံကွားလိုကျရမှမိုနာမဟုတျဘဲဒျေါအယျနာ ဖွဈနတောကိုသိလိုကျပွီးအလှနျဘဲအံ့သွသှားရလသေညျ.. ။ကိုတိုးကွီးလဲ ဒျေါအယျနာနဲ့ပထမဆုံးစလိုးတုံးကပွီးစလှယျဘဲလှကွေီးထိုးပုံစံနဲ့ဘဲအပွီး.. လိုးခဲ့ပမေဲ့.. အခုဒျေါအယျနာကိုဖငျထောငျခိုငျးပွီးလိုးခငျြတာကွောငျ့.. အနျတီ .. ဖငျကုနျးပေးပါလား. . လို့ပွောလိုကျသညျ.. ။ဒါကိုကွားလိုကျတဲ့ဖူးဖူးသညျ..သူ ရိုသလေေးစားတဲ့.. အနျတီဒျေါအယျနာတယောကျဖငျကုနျးရတော့မညျကိုတှေးပွီး ခဈကနဲရယျလိုကျမိသညျ.. ။တျောပါသေးသညျ.. ။
လိုးနသေောဒျေါအယျနာနဲ့ ကိုတိုးကွီးမကွားလိုကျဘူး. .။ ဒါပမေဲ့.. ဒျေါအယျနာသညျကိုတိုးကွီးဖငျကုနျးခိုငျးတာကိုမလုပျ.. ။နောကျမှ .. ကိုတိုးရယျ. . အပျေါထပျမှာသမီးတို့ရှိနတေယျ. . ဒီအတိုငျးဘဲလုပျပါတော့ . .အခြိနျမရှိဘူး. .လို့ပွောတာနဲ့ကိုတိုးကွီးလဲ.ဒျေါအယျနာကို..ကုတငျစောငျးမှာပေါငျကားပွီး … သူမရဲ့ပေါငျတနျဖွူဖွူကွီးတှကေိုသူ့ပုခုံးပျေါထမျးတငျပွီးလိုးသညျ.. ။ အငျးကနဲအငျးကနဲဆောငျ့ဆောငျ့လိုးတာ.. ။ခြောငျးကွညျ့နတေဲ့ဖူးဖူး..ရငျတှေ တုနျနသေညျ.. ။ကွကျသီးတှတေဖွနျးဖွနျးထရသညျ..။ဒျေါအယျနာ…အီးအီး.. အီးနဲ့ ကြိတျညညျးပွီးဆောငျ့ခကျြမြားကိုကနြေပျနသေညျ. . ။ကိုတိုးကွီးလဲ အခြိနျဆှဲမနတေော့ဘဲဒလစပျလိုးဆောငျ့ကာပွီးသှားတော့သညျ. .။ ကောငျးလား. . အနျတီ. . အရမျးကောငျးတာဘဲကှာ….. အီဆိမျ့နတောဘဲ. . အနျတီပွီးရဲ့လား. . ၂ကွိမျတောငျပွီးတယျ. . ကြေးဇူးဘဲကိုတိုး. . ကဲအနျတီတကျတော့မယျ. . ဒျေါအယျနာထမိနျကောကျဝတျနခြေိနျခြောငျးနတေဲ့ဖူးဖူးလဲကဗြာကရာတကျပွေးရ သညျ. . ။ဖူးဖူးရဲ့ထမိနျအနောကျဘကျမှာအရအေကှကျကွီးရှဲနသေညျ.. ။ဖူးဖူးလဲ ရငျတှတေလှပျလှပျနဲ့သိလိုကျမွငျလိုကျရတာကိုမယုံနိုငျ. . ။အနျတီအယျနာနဲ့ ကိုတိုးကွီးလိုးကွတာမြားကိုကွညျ့ပွီးဖူးဖူးလဲစိတျတှထေကွှကာ…အလိုးခံခငျြစိတျတှေ အရမျးဖွဈပျေါနတေော့သညျ..။ဟိုတနကေ့သူမ..တှလေို့ကျရသောကိုတိုးကွီးရဲ့လီးမဲမဲတုတျတုတျကွီးကိုတမျးတလိုလားနေ ပသေညျ.. ။ဖူးဖူးရဲ့လကျခြောငျးလေးတှကေသူမပေါငျကွားကအရတှေေ..စိုစိုရှဲနသေညျ့ ခုံးမောကျနသေော စောကျဖုတျကွီး ကို ဖိကာဖိကာ ပှတျနမေိပါတော့သညျ . . …ပွီးပါပွီ။
မိုးကအရမ်းသဲသဲမဲမဲရွာနေသည်.. ။ လေရောမိုးရောသည်းထန်နေသည်.. ။အိမ်မှာစနိုးတယောက်ထဲ.. ။အမေက..ဒီနေ့ အလုပ်ပိတ်ရက်မို့.. အန်တီဒေါ်လီတို့အိမ်ကိုသွားသည်. . ။အကြီးမမိုနာကဒီနေ့.. အလုပ်သွားသည်. . ။အိပ်ရာထဲစောင်ခြုံကာကွေးနေမိသည်. .။ ကျောင်းကအတန်းဖေါ်သူငယ်ချင်းမီရှယ်လ်ဆီကငှားလာတဲ့ဒီဗွီဒီကိုသတိရပြီး စက်ထဲထိုးထည့်ပြီးကြည့်လိုက်သည်.. ။အာရှသူတွေနဲ့အဖြူကောင်တွေ နှစ်ပါးသွားတာတွေကိုကြည့်ပြီးစနိုးစိတ်တွေမရိုးမရွဖြစ်လာသည်.။ လေးဘက်ကုန်းကာဖင်ထောင်ပေးထားနေတဲ့အာရှသူလေးကိုအဖြူကောင်က လီးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ဆောင့်လိုးနေတာကြည့်ပြီး.. စနိုးမှာခံချင်စိတ်တွေတဖွါးဖွါး ပေါ်ပေါက်ပြီးထကြွလာရတော့သည်..။ မီရှယ်လ်ကဒီ. .. ဒီဗွီဒီထဲကအာရှသူတယောက်ကစနိုးနဲ့ချွတ်စွတ်ဘဲ… ကြည့်ပါဆိုပြီးငှားလိုက်တာပါ. . ။စနိုးအိမ်နေရင်းထမိန်နွမ်းလေးဝတ်ထားးသည်..။ ကုတင်ပေါ်စောင်ခြုံရင်းကြည့်နေတာ.. အပြာကားထဲကယောင်္ကျားလိင်တန်ထွားထွားတွေကို ကြည့်ပြီးအသဲယားလာသည်. . ။စနိုးရဲ့ဖြိုးဖြိုးရွှေရင်တွေရဲ့နို့သီးလေးတွေ..မာတောင် လာသည်. . ။ပေါင်ကြားထဲကဆီးခုံကြီးကဖါးခုံညင်းကြီးတကောင်လိုခုံးမောက်ပြီး အဖုတ်ထဲကယားလာသည်.. ။အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေထူအမ်းပြီးယားလာသည်. .။ ပြေကျွတ်နေသောထမိန်အပေါ်ကဘဲအဖုတ်ကိုကိုင်စမ်းမိနေသည်. .လက်ချောင်းတွေက အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုစမ်းနေမိသည်.. ။
အရေတွေစိုနေပြီ..။လက်တဖက်က အဖုတ်ကိုပွတ်နေမိတဲ့အချိန်ကျန်လက်တဖက်ကနို့သီးတွေကိုစမ်းကြည့်ပြီး.. ပွတ်နေမိသည်.. ။ စနိုးအခုအချိန်အထိအပျိုစစ်နေသေးသည်.. ။သူမဖါသာ ပွတ်နှိုက်တာကလွဲလို့ယောင်္ကျားလီးနဲ့မတွေ့ဘူးသေး..။လီးနဲ့..အထိုးမခံဘူးသေးတာကို ပြောတာပါ.. ။လီးကိုတော့စနိုးကိုင်ကြည့်ဘူးပြီးပြီ..။စနိုးနဲ့..အမြဲတွဲဖြစ်တဲ့..ကျောင်းအတူ တက်တဲ့မီရှယ်လ်ကြောင့်ပေါ့. .။ ဒီတိုင်းပြည်ရောက်မှစနိုးအပျိုဖြစ်သည်လို့ပြောရမှာပါ.. ။နယ်စပ်ကစခန်းတုံး ကရင်ပြားတင်ပြားလေးနဲ့. အပျိုပေါက်စလေး..။ ဒီအမေရိကန်ပြည်ရောက်ပြီးမှစနိုးထွားလာသည်.. ။အမေပြောတာ ထင်တာကတော့ဒီမှာစားတဲ့နို့..ထောပတ်.. ဒိန်ခဲတွေနဲ့ဟော်မုန်းတွေများတဲ့ အသားတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်.. တဲ့. .။ မီရှယ်လ်နဲ့တည.. ကလပ်တခုကိုလိုက်ရင်း.. ဘီယာသောက်ကြသည်.. ။ကလပ်ကအပြန် . . ယောင်္ကျားလေးတအုပ်နဲ့..တောအုပ်လေးထဲ.. ဆေးခြောက်ရှူကြပြီး… မီရှယ်လ်ရဲ့အကို တင်မီကစနိုးကိုနမ်းသည်. .။ စနိုးလဲ..ဘီယာသောက်ထားတဲ့အရှိန်နဲ့.. သူ့ကိုပြန်နမ်းသည်..။ ရီးစားလဲမဟုတ်.. ဘာမှလဲမဟုတ်.. ။တင်မီကစနိုးရဲ့နို့ကိုကိုင်သည်..။ နို့သီးလေးတွေကိုပွတ်သည်. . ။လက်မနဲ့လက်ညှိုးကိုသုံးပြီးဖွဖွလေးချေသည်. .။ သူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့်ချပြီးလီးကိုထုတ်သည်. . ။ စနိုး.. ကိုင်ကြည့်..ဆိုပြီး စနိုးလက်ထဲလီးကြီးလာထည့်သည်. . ။စနိုးလဲစိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီးတင်မီ့… လီးတန်ကြီးကိုကိုင်သည်. . ။ဖျစ်ညှစ်သည်. . ။ရှေ့တိုးနောက်ငင်ကစားသည်. .။ ဒီထက်တော့မပို.. ။ အော်. . မနေ့ညကလဲတအိမ်ထဲနေတဲ့.. ကိုတိုးကြီးရဲ့လီးကို..စနိုးတွေ့ဘူးလိုက်ရသည် .. ။
ကိုတိုးကြီးကမြေအောက်ထပ် ဘေ့စ်မင့် မှာနေသည်.. ။မြေအောက်ထပ်မှာလဲ အိမ်သာနဲ့ရေချိုးခန်းတွဲရက်ပါသည်..။ စနိုး..မိုနာတို့..ညီအမနဲ့ကိုတိုးကြီးကတအိမ်ထဲနေပြီးမောင်နှမတွေလိုဘဲ..အတူချက်စား..အတူ..ဗွီဒီယို.. ကြည့်ကြသည်.. ။ဒီအိမ်မှာစနိုး.. မိုနာ.. အမေ.. နဲ့ဖူးဖူးတို့နေသည်. .။ ကိုတိုးကြီးရှိတဲ့မြေအောက်ထပ်ကိုစနိုး.. မိုနာတို့ညီအမတွေနဲ့ဖူးဖူးတို့တံခါးမရှိ ဒါးမရှိဆင်းသွားနေကြ.. ရုပ်ရှင်အတူထိုင်ကြည့်နေကျဖြစ်သည်.. ။ဖူးဖူးကစနိုးတို့နဲ့ ဘာမှမတော်။နယ်စပ်စခန်းထဲကဆွေမျိုးလိုဘဲအတူတူနေခဲ့ကြတဲ့သူတွေပေါ့.. ကိုတိုးကြီးကစနိုးတို့ဖူးဖူးတို့လိုထိုင်းနယ်စပ်ကလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး. .။ကိုတိုးကြီးက..သင်္ဘောဝမ်းဘိုက်ထဲမှာတရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့အတူ..ခိုးဝင်ပြီး. .နယူးယောက်ကို ရောက်လာတဲ့လူ.. ။ဒီရောက်မှ.. အလုပ်လုပ်ခွင့် ၀က်ပါမစ် ရအောင်ကြံဖန်ပြီး တဆင့်ပြီးတဆင့်အဆင်ပြေလာသူတယောက်ပါ. . ။အလုပ်အမျိုးမျိုးလုပ်လာသူ တယောက်…။ မနေ့ညကကိုတိုးကြီးနေတဲ့အောက်ထပ်စနိုးဆင်းသွားတော့ကိုတိုးကြီး အပြာဒီဗွီဒီရုပ်ရှင်ကြီးပြရက်တန်းလန်းကြီးနဲ့ထိုင်ရက်ကြီးအိပ်ပျော်နေသည်. .။သူ အိပ်မပျော်ခင်ကလုံချည်ကိုဖြေချပြီးကွင်းထုနေပုံဘဲ. . ။ကြည့်ရတာအလုပ်၃ခုလောက် ဆက်တိုက်လုပ်တဲ့လူမို့..အရမ်းပင်ပန်းပြီး.ကွင်းထုနေရင်း..ထိုင်ရက်ကြီး….အိပ်ပျော်သွားတဲ့ ပုံပါ. . ။သူ့လုံချည်ကပြေကျနေပြီးသူ့လီးညိုညိုကြီးကမတ်မတ်ကြီးတောင်နေသည် . . ။စနိုးလဲရုတ်တရက်ကိုတိုးကြီးရဲ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့.. ရင်တွေတအားခုန်.. စိတ်တွေလှုပ်ရှားရသည်. . ။ကြက်သီးတွေထရသည်. .။ ကိုတိုးကြီးနဲ့..သွားအတူလာအတူ…နီးနီး.စပ်စပ်နေလာကြတာ..သူ့မှာ…ဒီလို..လီးတုတ်တုတ် ရှည်ရှည်ကြီးရှိနေတာမသိရဘူး. . ။
စနိုးလဲသူ့ဘေးနားကပ်ပြီးလီးကြီးကို..သေသေချာချာ ကြည့်တာတောင်ကိုတိုးကြီး.. တရှူးရှူးနဲ့အိပ်မောကျနေပြီး. . ဘာမှမသိ. .။ ဟိတ်.. စနိုး. . ဘယ်လောက်တောင်ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်မိနေသလဲမသိဘူး..။ အနောက်ကခေါ်သံကြောင့်လှည့်ကြည့်မိလိုက်တော့. . ဖူးဖူးအောက်ထပ် ဆင်းလာတာဖြစ်နေသည်. . ။ဖူးဖူးကစနိုးနဲ့မိုနာတို့ညီအမတွေထက်အသက်နဲနဲ ပိုကြီးသည်. . ။၂၅နှစ်လောက်ရှိပြီ. . ။ရီးစားထားဘူးပြီးယောင်္ကျားအတွေ့အကြုံရှိသည်။ စနိုးက. . ရှူး. . ဆိုပြီးလက်ညှိုးကိုသူ့နှုတ်ခမ်းလေးမှာကပ်ပြီး..ကိုတိုးကြီး လီးပေါ်နေတာကိုဖူးဖူးကိုပြလိုက်သည်. . ။ဖူးဖူးလဲခြေဖေါ့နင်းပြီးအနားကပ်လာသည် . . ။ကိုတိုးကြီးလီးကြီးကိုသေသေချာချာကြည့်သည်..။ ဖူးဖူးသည်ကိုတိုးကြီးရဲ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကိုအနီးကပ်ကြည့်ရင်း. .သူမ ပေါင်ကြားကိုလက်နဲ့ကိုင်လိုက်သည်.. ။စနိုးကသဘောကျစွာနဲ့တခိခိရယ်သည်.။ မနေ့ညကအကြောင်းပြန်တွေးလိုက်မိတော့.. ကိုတိုးကြီးလီးကြီးကို ပြန်မြင်ယောင်သွားပြီးကိုတိုးကြီးလီးကြီးကိုထပ်မြင်လိုစိတ်ဖြစ်မိရသည်.. ။ကိုတိုးရဲ့ လီးကြီးကညိုညိုကြီး.. ။အကြောကြီးတွေထောင်ထနေပြီး. . ထိပ်ကဒစ်ဆိုတဲ့ ဟာကြီးကကောက်ကောက်ကြီး.. ။ဒါကြီးနဲ့စောက်ပတ်ထဲထိုးထဲ့ရင်ဆန့်မှ ဆန့်ပါ့မလားမသိဘူး. . ။စောက်ပတ်ကလက်ညှိးတောင်မနဲသွင်းနေရတာ. . ။ကွဲပြဲ သွားမလား. . ဆိုပြီးကြက်သီးတွေထရသည်. . ။စနိုးကိုတိုးကြီးရဲ့လီးညိုကြီးကို မြင်ယောင်ရင်း. . သူမအဖုတ်ကိုဖိဖိပွတ်ရင်းတဟင်းဟင်းနဲ့ကာမအရှိန်တွေ တက်လာသည်.. ။
အရေတွေစိုစိုရွှဲနေတဲ့မိမိအဖုတ်ထဲကိုတခုခုနဲ့ထိုးသွင်းကာ အာသာဖြေဖျောက်လိုတဲ့စိတ်တွေအလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်နေပြီ.. ။ ဖူးဖူးကတော့ပြောသည်.. ။ဒါသဘာဝဘဲစနိုး… တဲ့. . ။ယောင်္ကျားတွေကမိန်းမ စောက်ပတ်ကိုမြင်ရင်စိတ်ကြွသလို.. မိန်းမတွေကလဲယောင်္ကျားလီးကိုတွေ့ရင် စိတ်ကြွကြရတာဘဲပေါ့.. တဲ့. . ။ ကိုတိုးကြီးသည်စနိုးတို့အမေဒေါ်အယ်နာနဲ့အလုပ်.. အတူတူလုပ်ရာက… ဒေါ်အယ်နာကယောင်္ကျားလေးအဖေါ်လဲရအောင်သူတို့နဲ့စပ်ပြီး.. အိမ်ငှားနေဖို့ပြောတာနဲ့ဒေါ်အယ်နာတို့နဲ့အခုလိုလာပေါင်းပြီးနေတာဖြစ်သည်…။ သမီး၂ယောက်အမေဒေါ်အယ်နာသည်.. ဖြူဖွေးတောင့်တင်းဆဲ.. ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်ဒေါ်အယ်နာ.. ဖြူလွန်းဖွေးလွန်းလို့..အိမ်နံမည် စနိုးလို့ခေါ်တဲ့ခင်နှင်းဖြူ… သူမထက်တနှစ်ဘဲကြီးတဲ့တောင့်တင်းစိုပြေတဲ့မိုနာ .. သူတို့နဲ့အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ဖူးဖူး.. မိန်းမချော၎ယောက်နဲ့တအိမ်ထဲနေရတဲ့ ကိုတိုးကြီး.. သည်မချောလေးယောက်ကိုယ်တယောက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်နေပြီ . . ။အတူတူနေတော့. . ဒီမချော၎ယောက်အောက်စလွတ်တတွေ..ဖင်ပေါ်တာတွေ . တွေ့လာရသည်. .။တခါတလေ… ..သူတို့ဖါသာပေါင်ကြားပွတ်နေတာ…. နှိုက်နေတာတွေတောင်တွေ့ဘူးရ သည်. . ။ဒါတွေကိုသာယာမိနေပြီးကိုတိုးကြီးလဲ… ဒီမိန်းမတွေရဲ့ခိုင်းဘတ်ကြီး ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာသည်.. ။ ဒေါ်အယ်နာသည်ကိုတိုးကြီးကိုအလွန်ဘဲအားကိုးသည်.. ။အားထား သည်.. ။
လင်သေမုဆိုမဖြူဖြူဖွေးဖွေးတောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီးမို့ကိုတိုးကြီး သည်ဒေါ်အယ်နာနဲ့နီးနီးစပ်စပ်နေရတာကိုရော.. ချစ်စရာစိုပြေချောမောတဲ့ညီအမ စနိုးနဲ့မိုနာ.. ဖူးဖူးတို့နဲ့ဒွေးရောရှက်တင်နီးစပ်စွာနေရတာကော.. စိတ်တွေ လှုပ်ရှားမိ.. ဖေါက်ပြန်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်မိရသည်. .။ ကိုတိုးကြီး.. အလုပ်ကဆင်းတော့ညနေစောင်းနေပြီ.. ။မိုးကတနေကုန် သဲသဲမဲမဲရွာနေတာခုထိလေရောမိုးရောသဲနေသည်. . ။အိမ်အပြန်. .စနိုး မုန့်မှာလိုက်တာသတိရပြီးအိမ်အပြန်လမ်းမှာရှိနေတဲ့လာဟော. . ဆိုတဲ့.. ပါကစ္စတန်ဆိုင်လေးကိုဝင်ပြီးစနိုးမှာလိုက်တဲ့မလိုင်မုန့်တွေဝင်ဝယ်သည်. . ။စနိုး နဲ့မိုနာတို့ညီအမတွေနဲ့သူတအိမ်ထဲနေပြီးတအားရင်းနှီးသည်.. ။ဖူးဖူးဆိုတဲ့ တယောက်နဲ့လဲဒီလိုဘဲ.. ။ဖူးဖူးကပုတ်လားခတ်လား. .ကလိထိုးလိုက် ဆွဲဆိတ်လိုက်အမြဲလုပ်တတ်သည်.. ။ မိုနာနဲ့သူသူတို့အားလုံးချက်စားဖို့ဈေးအတူအမြဲထွက်ဝယ်ဖြစ်သည် .. ။နွေရာသီမှာမိုနာသည်ပေါင်ရင်းအထိတိုသောဘောင်းဘီပါးပါးပြတ်ပြတ်လေး ၀တ်လေ့ရှိသည်.. ။ဈေးဝယ်ပြီးဘိုက်ဆာရင်.. Roy Rgers ဆိုင်မှာ အတူတူထိုင်စားလေ့ရှိရာမိုနာရဲ့ပေါင်တန်ရှည်တွေကိုသူအနီးကပ်မြင်ရသည်. .။ ပေါင်ဖြူဖြူတွေမှာမွေးညင်းစိမ်းနုနုလေးတွေကိုတွေ့မြင်ရတာသူ့စိတ်တွေမရိုးမရွ ထကြွရသည်. . ။တကြိမ်မှာကိုတိုးကြီးသည်မိုနာ့ပေါင်တန်ကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ တို့မိသည်. . ။လက်ညှိုးလေးနဲ့ပွတ်နေမိသည်. . ။မိုနာသည်သူ့ကိုစိတ်မဆိုး. .။ သူလုပ်တာကိုမတား..မရုန်းတဲ့အပြင်.. တခစ်ခစ်နဲ့သဘောကျသည်. .။အောက် နှုတ်ခမ်းဖေါင်းဖေါင်းလေးကိုသွာလေးနဲ့ကိုက်ပြီး ယားတယ်. . အကို. . လို့ ပြောသည်.. ။သူလဲမိုနာ့ပေါင်တွေကိုကားပေါ်မှာလဲပွတ်မိသည်..။သမီးရီးစားလဲ မဟုတ်. . ဘာလဲမဟုတ်.. ပေါင်တော့ပွတ်ပေးနေမိပြီ. .။
တနေ့ကိုတိုးကြီးရုပ်ရှင်အခွေထိုင်ကြည့်နေခိုက်မိုနာအောက်ထပ်ဆင်းလာသည်.။ ဟိတ်.. ဘာလုပ်နေလဲ. . ဗွီဒီယိုပိတ်လိုက်. .ကိုတိုးကြီး.. မိုနာ့စကားကိုနားထောင်သည်. . ။ရီမုတ်နဲ့ထောက်ကနဲတီဗွီကို ပိတ်လိုက်သည်. . ။မိုနာသည်စီဒီစက်ဆီလျောက်သွားကာ. . သီချင်းဖွင့်လိုက်သည် . ။ အကို့ကိုကပြမလို့. . ကြည့်. . သီချင်းသံစတင်ထွက်ပေါ်လာသည်. .။ …ဗနင်လာအိုက်စ်ရဲ့အိုက်စ်အိုက်စ်ဘေဘီဆိုတဲ့သီချင်း. ကိုတိုးကြီးကဆိုဖါမှာ.. ထိုင်နေတော့မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့မိုနာရဲ့ဘောင်းဘီ တိုတိုလေးကြောင့်ပေါင်အရင်းကနေစပြီးဖြူဝင်းနေတဲ့ပေါင်တန်ကိုသူ့မျက်နှာ နားကပ်ပြီးမြင်တွေ့နေရသည်..။ တုံတုံတုံ. .. တုံတုံတုံ. .. . အိုက်စ်အိုက်စ်ဘေဘီ.. ဘေဘီ.. တုံတုံတုံ. . တုံတုံတုံ.. တုံ့တုံ. . မိုနာကသည်.. ။မမှောင့်တမှောင်အခန်းထဲသူတို့၂ယောက်ထဲရှိနေသည်. .။ အခုအခံမပါတဲ့ဘလောက်စ်ကြောင့်ကနေတဲ့မိုနာ့ရင်သားစိုင်တွေကတုန်ခါ.. လှုပ်နေကြသည်.. ။ရင်သားထိပ်သီးလေးတွေကဘလောက်စ်ပါးပါးအသားမှာကပ်ပြီး အရာလေးထင်းနေသည်.. ။အသဲယားစရာပါလား. . မိုနာရယ်. . .။ ကိုတိုးကြီးစိတ်တွေအရမ်းလှုပ်ရှားပြီးလုံချည်ကြားကလီးတန်ကြီးဒိုင်းကနဲ မတ်မတ်တောင်လာရသည်. .။ ကားကအိမ်ရှေ့ကိုရောက်ပြီးထိုးဆိုက်လိုက်ရတာကြောင့်ကိုတိုးကြီးရဲ့.. အတွေးမြင်ယောင်မှုတွေရပ်သွားသည်.. ။ ကိုတိုးကြီးစနိုးအတွက်မလိုင်မုန့်ထုပ်ကလေးဆွဲပြီး.. အိမ်ထဲပြေးဝင်သည်.. ။မိုးကသဲနေဆဲ. . ။လေကလဲပြင်းနေဆဲ.. ။
စနိုး. . နင့်အတွက်မလိုင်မုန့်ပါတယ်. . စနိုးဘယ်ရောက်နေလဲ.. ။စနိး… စနိုး. .. ကိုတိုးကြီး. .. စနိုးကိုကြည့်ရတာအိပ်ရာထဲကထလာတဲ့ပုံဘဲ.. ။တွန့်ကျေနေတဲ့ဘလောက်စ် အထဲမှာဘာမှခံဝတ်ထားပုံမပေါ်ဘူး. . ။လုံးဝန်းတဲ့ရင်သားတွေကလှုပ်တုတ်တုတ်နဲ့ . ။ထမိန်ဟောင်းလေးကလဲနွမ်းကျေနေသည်. .။ စနိုးကအ်ိပ်နေတာကိုး. . အိပ်ပါဘူး. . မိုးအေးလို့စောင်ခြုံထဲကွေးနေပြီးဗွီဒီယိုကြည့်နေတာ. . စနိုးကမလိုင်မုန့်သိပ်ကြိုက်သည်. .။ ကိုတိုးကြီးယူလာသောမလိုင်တွေကို.. ဖွင့်နှိုက်နေတုံး.. သူမဖင်အနောက်ဖက်ထမိန်မှာ အရေတွေစိုကွက်နေတာကိုတိုးကြီးတွေ့လိုက်သည်.. ။ကြည့်၇တာရာစီသွေးတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး. . ။မာစတာဗေးရှင်း.. လက်နဲ့အာသာဖြေနေတာဖြစ်ဖို့များ သည်.. ။အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိခိုက်မို့ကိုတိုးကြီး.. စိတ်တွေဖေါက်ပြန်မိနေသည်. .။ စနိုးကမလိုင်မုန့်တွေပလုပ်ပလောင်းစားနေချိန်. . စနိုးရဲ့စွင့်ကားပြီး..အနောက်ဖက်ကို ကော့ကောက်ဖုထွက်နေတဲ့ဖင်တွေကိုမသိမသာဖတ်ကနဲရိုက်လိုက်သည်..။ ဟိတ်.. ဘာလဲကိုတိုးကြီး. . မလိုင်ကြိုက်လို့လားမသိဘူး. . စနိုးဖင်တွေကြီးလာသလိုဘဲ. . အို.. ကိုတိုးကြီးကလဲ. . ကြီးလို့လား. . ကြီးတာပေါ့. . ဒီမှာကြည့်လေ. . ကိုတိုးကြီးလက်ကဖင်တုံးတွေကိုဆုတ်ကိုင်ပြလိုက်သည်. . ။ အိုး. . စနိုးရင်တွေ တုန်သွားသည်..။ ဟိတ်.. ဘာလို့ကိုင်တာလဲ. . ဖင်ကြီးလို့ပေါ့. . စနိုး က နှုတ်ခမ်းလေးစူပြီး.. ကိုတိုးကြီး လဲ ကြီးတာဘဲ . . မလိုင်ခဲတွေ အရမ်းစားလို့လား . . လို့ပြောသည် .. ။
ဘာ . . ငါက ဘာကြီးလို့လဲ . . ဟီး . . ကိုတိုးကြီး က ကြီးတာပေါ့ . . မဲမဲ တုတ်တုတ်ကြီး . . ဘာပြောတယ် . . ကိုတိုးကြီး ရဲ့ ပေါင်ကြားက ဟာကြီးလေ .. အကြီးကြီး ဘဲ . . အံမာ.. စနိုး .. ဘယ်လိုသိလဲ… ပြောစမ်း . . ဘယ်တုံးက မြင်လို့လဲ . . ဟိုတနေ့က ကိုတိုးကြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး အိပ်ပျော်နေတာ . . အတန်ကြီး က မတ်မတ်ကြီး ထောင်နေတာ တွေ့တာပေါ့ . . မဖူးဖူး တောင် တွေ့သေးတယ် . . ကိုတိုးကြီး က နင်တို့တွေကတော့ စိတ်ထဲ ဘာဖြစ်သွားလဲ . . ရင်တွေ ဘာတွေ ခုန်သွားလား . . လို့ စပ်ဖြဲဖြဲ နဲ့ မေးသည် . .။ စနိုးလဲ မလိုင်တွေကို ပလုပ်ပလောင်းနဲ့ စားရင်း အသဲယားသွားတာပေါ့… . .ကြောက်စရာ ကြီး . . လို့ ပြောသည် .. ။ စနိုး..လာ.. လာထိုင်စမ်း . .ဒီမှာ..ဆိုပြီး.. စနိုးကို လှမ်းဆွဲပြီး သူ့ပေါင်ပေါ်ထိုင်စေသည် ..။ အိ.. ကိုတိုးကြီး . . ဘာကြီး လဲ .. မာမာကြီး . . တောင်နေတဲ့ ကိုတိုးကြီးရဲ့ လီးတန်ကြီးပေါ်ထိုင်မိလို့ စနိုး သူမဖင်အိအိကြီးတွေ ကို ကြွလိုက်သည် .. ။ ကိုတိုးကြီးဟာကြီး မာထောင်နေတယ် . . အဟိ . . ကိုတိုးကြီး က စနိုးထမပြေးနိုင်အောင် ဆွဲဖိထားသည် . . ။ကိုတိုးကြီး ရဲ့ လီးတန်ထိပ်ဖူးကြီး က လုံချည် နဲ့ ထမိန် ကြားက ခံနေလင့်ကစား.. စနိုးရဲ့ စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းကြီးကို ဖိထိုးမိနေသည် . . ။စနိုးတအားစိတ်လှုပ်ရှားသွားသည် . . ။ တကိုယ်လုံး..တုန်ခါသွားသည် .. ။ အို.. အို . .. ကိုတိုးကြီး . . ထိုးမိနေတယ် . . ဘာထိုးမိတာလဲ . . ကိုတိုးကြီး ဟာကြီး က စနိုးဟာကို ထိုးနေတယ် . . စနိုးရဲ့ ဘာကို ထိုးမိနေတာလဲ . .။
အို . . ပြောချင်ဘူး . . ပြောပါ..ရှက်မနေပါနဲ့ဟာ.. ဘယ်သူမှ ကြားတာမှမဟုတ်တာ . . စနိုးက မျက်စောင်းလေးထိုးလိုက်ပြီး.. စောက်ပတ်ကို.. လို့ပြောလိုက်သည် . .။ ကိုတိုးကြီးရဲ့ လီးတန်ကြီးက ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ သူမ စောက်ပတ်ကို ထိုးနေသည် . .။ ကျင်ကနဲကျင်ကနဲ ဖြစ်သွားရသည် . . ။ ကြက်သီးတွေလဲ တအားထရသည် . .။ ကိုတိုးကြီး . .စနိုး.. စနိုး . .. ဘာဖြစ်လဲ . . စိတ်တွေ တမျိုးကြီးဘဲကွာ . . လာ.. ဒီစိတ်တွေ ပျောက်သွားအောင် ကိုတိုးကြီး လုပ်ပေးမယ် . . ကိုတိုးကြီးသည်စနိုးလက်ကလေးကိုဆွဲကာသူ့လီးတန်ကြီးပေါ်အုပ်တင်ပေးပြီး… . . ဆုတ်ကိုင်စေသည် .. ။မာမာနွေးနွေးအတန်ကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ထားမိရချိန် စနိုး ရဲ့ ပေါင်ကြားမှာ အရေတွေ တသွင်သွင်စီးဆင်းနေပြီ . ..။ ကြီးလိုက်တာ ကိုတိုးကြီးရယ် . . ပွတ်ပေး… လက်ကလေးနဲ့ ပွတ်ပေး . . စိတ်ညှို့ခံထားရတဲ့ လူလို . . စနိုးသည် သူ ခိုင်းတာက်ု နာခံနေမိပြီ . . ။ သူ့ လီးတန်ကြီး ကို ဆုတ်ကိုင်ပွတ်သပ်ပေးနေမိသည် . .. ။တင်မီဆိုတဲ့ ကောင်လေးကို တောင် စနိုး လီးကိုင်ပေးဘူး သည် .. ။ ကိုတိုးကြီး သည် သူ့အပေါ် အမြဲ ကောင်းသည် . . ။ မုန့်လဲ အမြဲဝယ်ကျွေးသည် . . ။ သူ့ကို လုပ်ပေးချင်နေသည် . .။ စနိုး . . ဟင် . . ဘာလဲ . . အပြာကားကြည့်ဘူးတယ်မှုတ်လား . . အင်း . . စုတ်တာတွေ တွေ့ဘူးတယ်မှုတ်လား . . အင်း . . ငါ့ကို စုတ်ပေးပါလားဟင် . . စနိုးတခါမှ မလုပ်ဘူးဘူး . . အခု လုပ်ကြည့်ပေါ့ . . လာ . . ကိုတိုးကြီး က သူ့ လုံချည်ကို ဖြေချလိုက်သည် . . ။ မြွေဟောက်ကြီးတကောင် ပါးပျဉ်းထောင်နေသလို မတ်မတ်တောင်နေတဲ့ လီးမဲမဲကြီး ကို စနိုး တွေ့လိုက်ရပါတော့ သည် . .။
ငုံလိုက်.. စနိုး . . စနိုး လီးတန်ကြီး ရဲ့ ထိပ် ကို လျာထိပ် နဲ့ တို့ကြည့်လိုက်သည် .. ။ ဒစ်ပြဲကြီး က .. ကားကားကြီး . . ။ ငုံလိုက်စနိုး . . စနိုးသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းငုံလိုက်တော့ငံကျိကျိအရသာကိုရလိုက်သည်. .။ စုတ်. . စုတ်ပေး. . စနိုးလဲအပြာကားတွေကြည့်ဘူးထားတော့အပြာကားထဲကလီးစုတ်တာတွေ တွေ့ဘူးနေပြီးသားပါ. . ။လီးမဲမဲတုတ်တုတ်ကြီးကိုစုတ်ပေးနေခိုက်အိမ်ရှေ့တံခါးကြီး ချောက်ကနဲဖွင့်လိုက်သံကြားလိုက်ရပါသည်..။ ဟာ.. မာမီပြန်လာပြီထင်တယ်. . စနိုးတက်တော့မယ်. . စနိုးအိမ်အပေါ်ထပ်ကိုတက်ပြေးသွားပါသည်. . ။လီးကြီးတောင်ရက်နဲ့ကိုတိုးကြီး ကျန်ရစ်သည်. .။ ဒေါ်အယ်နာနဲ့ကိုတိုးကြီးသည် ဆေ့ဖ်ဝေး ဆိုတဲ့စူပါမားကက်ကြီး မှာလုပ်ကြသည်. . ။အတူတူလုပ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့.. နေရာချင်းတော့ကွဲသည်.. ။ ကိုတိုးကြီးကစတိုကိပါ.. ။အနောက်ဘက်ကစတိုခန်းကြီးထဲမှာလုပ်ရသည်.. ။ ပစ္စည်းတွေကုန်ကားကြီးတွေနဲ့ရောက်လာရင်လဲသူတို့ဆိုင်ကြီးထဲကိုသွင်းယူဖို့ . . နေရာချထားပေးဖို့လုပ်ရသည်.. ။ဒေါ်အယ်နာကတော့သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို.. တာဝန်ယူရသည်. . ..။ ကိုတိုးကြီးသည်သူ့ရဲ့ထမင်းဒစားချိန်မှာဆိုင်ကြီးရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်Roof Top ကိုတက်ပြီးထမင်းစားတတ်သည်. . ။ခေါင်မိုးပေါ်ကနေပြီးသူတို့ဆိုင်ကြီး ဘေးကတခြားဆိုင်လေးတွေဘက်ကိုငေးကြည့်ရင်းအစားစား..အရေသောက်တတ် သည်. . . ။ခေါင်မိုးပေါ်ကိုလူတိုင်းတက်လို့မရပေမဲ့ကိုတိုးကြီးကစတိုကိပါမို့ သော့တွေကိုင်သူဖြစ်တာရယ်.. သူကခေါင်မိုးပေါ်တက်တက်ပြီးရှင်းလင်းရတာတွေ ရှိတာရယ်ကြောင့်တက်နိုင်တာဖြစ်သည်.. ။
ကိုတိုးကြီးခေါင်မိုးပေါ်တက်တက်ပြီး ထမင်းစားတတ်မှန်းသိတဲ့ဒေါ်အယ်နာလဲကိုတိုးကြီးကိုစကားပြောစရာ..ရှိရင်. . ..ဘယ်မှာ ရှာရမလဲသိနေသည်. . ။ခေါင်မိုးပေါ်ကိုတက်လိုက်လာလေ့ရှိသည်..။ ဒီနေ့ကိုတိုးကြီးရောဒေါ်အယ်နာရောညနေပိုင်းလုပ်ရသည်. . ။ထမင်းစားချိန် ရောက်တော့မှောင်နေပြီ.. ။ခေါင်မိုးပေါ်ကိုတက်ပြီးသူအိမ်ကလုပ်လာတဲ့ ပေါင်မုန့်ယိုသုတ်ကိုစားသည်. . ။ဆိုင်ကနေ၀ယ်တဲ့ပက်ဆီဘူးကိုဖွင့်သောက် သည်. . ။ကိုတိုးကြီးသည်မနေ့ညကအိမ်မှာ..မိုနာနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာကို..ပြန်စဉ်းစားမိတော့ သူ့လီးကဒိုင်းကနဲမတ်လာသည်. . ။ မနေ့ညကသူနဲ့မိုနာဘဲအိမ်မှာရှိသည်. . ။ဒေါ်အယ်နာနဲ့စနိုးတို့တနင်္ဂနွေညမို့ ဘုရားကျောင်းသွားသည်.. ။ဖူးဖူးကတော့အလုပ်ရှိလို့သွားသည်… ။မိုနာက အလုပ်မနက်ပိုင်းလုပ်ခဲ့လို့ပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီးမလိုက်။ကိုတိုးကြီးသည်သူနေတဲ့ မြေအောက်ထပ်မှာစတီရီယိုစီဒီစက်. . ဒီဗွီဒီစက်. . တီဗွီ.. အစုံဝယ်ထားသည်..။ ဒေါ်အယ်နာတို့လဲကိုတိုးကြီးဟာတွေယူသုံးနိုင်နေတာနဲ့.. အိမ်ပေါ်ထပ်မှာ ၀ယ်ထားမနေတော့. . ။သူတို့..သီချင်းဖွင့်လိုရင်.. ကာရာအိုကေဆိုချင်ရင်..ဒီဗွီဒီ ကြည့်လိုရင်ကိုတိုးကြီးဆီ.. ဆင်းသွားပြီးသုံးလေ့ရှိသည်.. ။သတင်းကြည့်နိုင်ရန် ရိုးရိုးတီဗွီအသေးလေးဘဲအပေါ်ထပ်သူတို့အိပ်ခန်းထဲထားသည်. .။ မနေ့ညကမိုနာသည်ကိုတိုးကြီးနေတဲ့မြေအောက်ထပ်မှာရောက်နေသည် . . ။ကိုတိုးကြီးနဲ့အတူရုပ်ရှင်ထိုင်ကြည့်နေတာ.. ။နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖါကြီးမှာ အတူတူထိုင်ကြည့်နေကြသည်.. ။
ဗွီဒီယိုကစုံထောက်အက်ရှင်ကားတခုဖြစ်ပေမဲ့ တော်တော်ကြမ်းသည်.. ။နံမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ရိုက်ထားပေမဲ့.. လိင်ဆက်ဆံရေးတွေကိုအသားပေးထားသည်.. ။၀တ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးတီး ခန်းတွေတင်မက. . လိင်ဆက်ဆံတာတွေကို.. အသေးစိတ်ပီပီပြင်ပြင်ပြသည်. .။ ကိုတိုးကြီးသည်သူ့နဘေးမှာအတွင်းခံခံဝတ်မထားတဲ့တီရှပ်ပါးပါးနဲ့. . ဘောင်းဘီအတိုလေးဝတ်ထားးပြီး. . ပေါင်တန်ရှည်ဖွေးဖွေးနှစ်ချောင်းကိုထောင်ကာ ရုပ်ရှင်စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေသောမိုနာနဲ့အမှောင်ချထားတဲ့အခန်းထဲ.. လိင်အသားပေးရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေရလို့စိတ်တွေဖေါက်ပြန်နေပေသည်. . ။မိုနာသည် စနိုးထက်ပိုပြီးအသားဖွေးဖြူ.. ပြီးပိုလဲချောသည်လို့ကိုတိုးကြီးထင်သည်. .။ရုပ်ရှင်ကကြမ်းတာအပြင်မိုနာရဲ့ပေါင်တန်တွေကလဲ..လှလွန်းဖွေးလွန်းတာကြောင့်ကိုတိုးကြီး ပေါင်ကြားကလီးတုတ်တုတ်ကြီးဟာမာကျောတောင်မတ်နေသည်. .။ မိုနာမှာလဲကိုတိုးကြီးနည်းတူဘဲစိတ်တွေထကြွနေသည်.. ။အိမ်ကြီးတခုလုံးသူမ နဲ့ကိုတိုးကြီးဘဲရှိနေတဲ့အပြင်အမှောင်ကလဲချထားသည်.. ။ရုပ်ရှင်ကလဲ ဘာကြမ်းသလဲမမေးနဲ့. . ။ယောက်ျားကမိန်းမကိုဆောင့်တာကိုအနီးကပ်တောင် ပြလိုက်သေးသည်.. ။အင်း..ကနဲ.. အင်းကနဲ… ဆောင့်လိုက်တိုင်းအသားချင်း ဖပ်ကနဲဖပ်ကနဲရိုက်ခတ်တဲ့အသံကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခန်းထဲ..စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဖြစ်နေသည်. .။ ကြမ်းတဲ့အခန်းတွေပြီးသွားပြီးအက်ရှင်အခန်းတွေရောက်လာတော့… အကို. . ဟင်.. မိုနာ . . ရုပ်ရှင်က .. အရမ်းဟော့တာဘဲကွာ . . မိုနာ . . စိတ်တွေ တမျိုးကြီး ဖြစ်လာတယ် . . အကိုရောဘဲ . . တခု ပြောပြလို့ရမလား. ပြောလေ . . ဘာလဲ . . မိုနာလေ.အဲလိုဆက်စ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်..မိုနာ့နို့တွေက..တအားတင်းလာတယ်သိလား . ..။
အထူးသဖြင့် နို့သီးလေးတွေ .. မာတောင်ပြီး တင်းမာလွန်းလို့ .. မကိုင်ဘဲ မနေနိုင်ဘူး . . ချေပွတ်မိရတယ် . . ဟေ.. ဟုတ်လား . . အကို စမ်းကြည့်ပါလား . .လာ.. အကို့လက် ပေး . . မိုနာက သူမ နို့သီးလေးတွေ မာတောင်နေတာ စမ်းခိုင်းတော့ ကိုတိုးကြီး တုန်ရီတဲ့ လက်တွေ နဲ့ စမ်းလိုက်မိသည် .. ။ အေး..ဟုတ်တယ်.. မိုနာ . .အို . .မာတောင်နေတာဘဲ.. အကို ချေပွတ်ပေးရမလား . . အင်း . . မိုနာ့ နို့သီးဖုလေးတွေ ကို တီရှပ် အပေါ်ကဘဲ သူ လက်မနဲ့ လက်ညှိုးသုံးပြီး ဖွဖွလေးချေနယ်ပေးနေသည် . .။ နဲနဲ သက်သာလား . . မိုနာ ညည်းသည် .. ။ အင်း..အင်….အင်း… မိုနာ့ ကိုယ်တခြားနေရာတွေမှာရော . . ဘာဖြစ်သေးလဲ . . ဖြစ်တယ် . . ဘာဖြစ်လဲ . . ဘယ်နေရာမှာလဲ . . ပြောမထွက်ဘူး.. ရှက်တယ် . . ပြောပါ မိုနာရယ် . . ဒို့ ၂ယောက်ထဲရှိတာဘဲ . . ရှက်မနေပါနဲ့ . . ကိုတိုးကြီး က မိုနာ့ နို့သီးလေးတွေသာမက လဲ နို့တခုလုံးကိုလဲ ခပ်ဖွဖွ ဆုတ်နယ်ပေးနေသည် ။ မိုနာလဲ ကိုတိုးကြီး ရဲ့ နားနားကို ကပ်ပြီး တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည် . .။ စောက်ပတ် . . စောက်ပတ်မှာ ဖြစ်နေတယ် . . ဘာဖြစ်နေလဲ မိုနာ . . ယားတယ်..အရမ်း.. ယားနေတယ်. . စိုရောစိုလား. . အင်း. .တအား.. စိုနေတယ်. . သက်သာအောင်အကိုလုပ်ပေးရမလား. . အကိုကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲလို့. . အကိုနမ်းပေးမယ်လေ. . ရှက်စရာကြီး. . အကို. မိုနာရှက်တယ်. . မရှက်နဲ့..မှောင်နေတာဘဲ.. နောက်ပြီးဒို့၂ယောက်ထဲ. . အကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပြောနဲ့နော်. . အင်း. . မပြောဘူး. . ကိုတိုးကြီးလဲကာမစိတ်.. အရမ်းကြွနေပြီဖြစ်တဲ့မိုနာ့ကိုဆိုဖါပေါ်လှဲချလိုက်ပြီး. နဂိုထဲကလျော့ရဲရဲဖြစ်နေတဲ့အိမ်နေရင်းဝတ်ထမိန်လေးကို..ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး..ပေါင်ဖြူဖြူနှစ် ချောင်းကြားကိုခေါင်းထိုးသွင်းလိုက်သည်. .။
မိုနာ့စောက်ဖုတ်သည်အရေတွေတအားစိုရွှဲနေသည်. . ။ကိုတိုးကြီးရတဲ့ အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘူး. . ။မိုနာ့စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကိုပထမဆုံး အောက်ကနေအထက်ကိုပင့်ပြီးကော်တင်ယက်လိုက်သည်. .။ အ…အ….အာ… အကိုရယ်. . .အို… အကိုရယ်. .. .. . ကိုတိုးကြီးရဲ့လျာကအပြားလိုက်ကြီး မိုနာ့စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းနှစ်မွှာကြားကိုဖိပွတ်ယက်တင်ကာလျာထိပ်က စောက်စိလေးကိုခလုပ်တိုက်သွားသည်. . ။မိုနာ. . တကိုယ်လုံးတုန်ခါသွားရသည်။မျက်လုံးလေးမှေးစင်းကာ.. ခါးလေးကော့တက်သွားသည်.. ။မိုနာ့ခါးသိမ်သိမ်လေးကို ဘယ်လက်နဲ့ဆွဲကိုင်ညာလက်ကမိုနာ့နို့တလုံးကိုမမှီမကမ်းလှမ်းဆုတ်ကိုင်ပြီး ကိုတိုးကြီးဆက်တိုက်အပေါ်အောက်စုံချီဆန်ချီလျက်ပေးပါတော့သည်. .။ အ..အ…အ….အ….အို..အို….အို…အို……….အို………. ဟင့်ဟင့်… အကို. . . မိုနာမှာ. . စောက်ပတ်ယားတဲ့ဝေဒနာကိုရရနေတာကြာပြီ. . ။ကိုတိုးကြီးနဲ့သူမ အတူတူပူးပူးတွဲတွဲအမြဲသွားလာနေတဲ့အချိန်. စိတ်တွေအမြဲနိုးကြွ ဖေါက်ပြန်ခဲ့ရတာ.. အခုတော့ကိုတိုးကြီးသည်သူမပေါင်ကြားထဲခေါင်းကြီး ရောက်နေပြီ.. ။ယက်နေပြီ..။ ကိုတိုးကြီးသည်မိုနာ့စောက်ပတ်ကဘာမှမကောင်းတဲ့အနံ့အသက်မရ..။ ဆပ်ပြာနံ့သင်းသင်းလေးသာရနေသည်.. ။ မိုနာ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝသွားသည်. . ။မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ခါအကို့အယက်ကို ခံပစ်နေသည်.. ။အကိုတိုးကြီးသည်တကယ်အယက်တော်သည်. . ။နောက်ကျရင် . . အကို့ကို ဘာဂျာတိုးကြီး လို့စပြီးနောက်ပြီး.. ခေါ်ဦးမည်. .။ အို. . အို့. .ဟ… မိုနာထွန့်ထွန့်လူးသွားရသည်. . ။ကိုတိုးကြီးရဲ့လျာကြီးရဲ့ထိပ်ကမိုနာ့.. စောက်ပတ်အတွင်းထဲကိုအတင်းတိုးဝင်ပြီးမွှေနှောက်လာလို့ပါ. . ။
ကောင်းလားဟင်.. မိုနာ. . အင်း..အင်း.. ကောင်းတယ်. .သိပ်.. သိပ်ကောင်းတယ်. . အရမ်းကောင်းနေတုံးဗြုံးကနဲအကိုရပ်လိုက်သည်.. ။ဟင်..ဘာ…ဘာလို့ ရပ်လိုက်တာလဲ. . ကောင်းနေဆဲရပ်လိုက်လို့ဖီလင်ပျယ်သွားသည်..။ ကိုတိုးကြီးသည်ဆိုဖါကြီးပေါ်ကဆင်းလိုက်သည်.. ။ပက်လက်လေးလှဲနေတဲ့ မိုနာ့ဘေးနားမှာလာရပ်လိုက်ပြီး.. ကိုတိုးကြီးသည်ခါးကလုံချည်ကိုကွင်းလုံးပုံ.. ချွတ်ချပစ်လိုက်သည်. .။ ဟယ်တော့. .မိုနာ.. တုန်လှုပ်သွားသည်.. ။ ကိုတိုးကြီးရဲ့လီးတန်မဲမဲကြီးကိုအနီးကပ်တွေ့မြင်လိုက်ရလို့ဘဲ. . ။ဒါ…ပထမဆုံး.. အကို့လီးကိုတွေ့ဘူးရတာပါ. . ။တအိမ်ထဲနိးနီးစပ်စပ်နေကြတော့. .အကို လီးတောင်တာကိုတော့ခဏခဏမြင်ဘူးခဲ့သည်.. ။လုံချည်ဝတ်ထားရက်လုံချည် အောက်ကထောင်ထတာကိုဘဲ.. မြင်ဘူးတာပါ. .။အကြီးကြီးဘဲအကို. . ကိုတိုးကြီးကသူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကိုမိုနာ့မျက်နှာနားတိုးကပ်ပေးလိုက်သည်..။ မိုနာသည်အပြာဇာတ်ကားတွေကိုနယ်စပ်မှာနေကထဲကကြည့်ဘူးသူဖြစ်သည်. .။ အကိုဘာလို့သူ့လီးကြီးသူမပါးစပ်နား..တိုးကပ်ပေးသလဲ..ဆိုတာ.သဘောပေါက်ပါသည် . . ။အကိုသည်မိုနာ့ကိုလီးစုတ်စေချင်လို့ဆိုတာသိသည်. .။ တခါမှစုတ်ဖူးဘူး. . စမ်းစုတ်ကြည့်မိုနာ. . အကို့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးချင်တယ်မှုတ်လားဟင်. . မိုနာခေါင်းလေးညှိမ့်သည်..။ အင်း. . မိုနာသည်ကိုတိုးကြီးရဲ့လီးကြီးကိုလက်ကလေးနဲ့မရဲတရဲဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်. .။ ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့ဖမ်းငုံလိုက်သည်. . ။ပူနွေးနေတဲ့လီးကြီးရဲ့ဒစ်လုံးကားကားကြီးကို အသာ.. စုတ်ကြည့်လိုက်သည်. .။ အိုး. . အင်း. .စုတ်.. စုတ်. . လီးကြီးထိပ်ကလျံကျနေတဲ့အရေကြည်တွေကငံကျိကျိ.. နဲ့. ..။ ကိုတိုးကြီးကသူလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြသည်. . ။သင်ပေးသည်. . ။
မိုနာပထမဆုံး လီးစုတ်ဘူးခြင်း…။ အင်းဟင်း. . ကောင်းတယ်. . ကောင်းတယ်. .စုတ်.. စုတ်. . . တချက်တချက်.. ပြွတ်ပြွတ်. . နဲ့မြည်သည်. .။ ကိုတိုးကြီးအရမ်းကောင်းလာပြီး.. မိုနာ့ကိုသူလိုးချင်တာကြောင့်..ပြီးလိုက်လို့.. မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီး.. စိတ်ကိုထိန်းနေဆဲ. . ချောက်ကနဲအိမ်ထဲတံခါးဖွင့်ဝင်လာတဲ့ အသံကြားလိုက်ရတာကြောင့်.. မိုနာ့ပါးစပ်ထဲရောက်နေတဲ့သူ့လီးတန်ကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ရသည်. .။ ဟေ့.. ဘယ်သူရှိကြလဲ. . မိုနာ. . ကိုတိုးကြီး. .. ဖူးဖူးရဲ့အသံ. .။ မိုနာကအသံပြန်ပြုလိုက်သည်. .။ ဖူးဖူး.. ပြန်လာပြီလား. . မိုနာတို့အောက်ထပ်မှာ. .. . မိုနာ. . ငါ. . ကြက်သားကြော်တွေပါလာတယ်. . လာစား. . ကိုတိုးကြီးရော. . ကိုတိုးကြီးနဲ့မိုနာအ၀တ်အစားတွေပြန်ဝတ်ကြသည်. .။ ကိုတိုးကြီးသည်သူ့ထမင်းစားချိန်မှာဆိုင်ကြီးရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်မှာပါလာတာတွေ စားရင်း. . မနေ့ညကမိုနာနဲ့ညိစွန်းကြတာတွေကိုပြန်လည်မြင်ယောင်နေပြီး ဘောင်းဘီအောက်ကလီးတန်ကြီးကမတ်မတ်တောင်နေသည်.. ။ ကိုတိုး. . . အနောက်ကလှမ်းပုတ်ပြီးခေါ်လိုက်သံကြောင့်လန့်သွားသည်. .။ ဒေါ်အယ်နာ. .။ ဟာ.. အန်တီ. . ကိုတိုး. . အန်တီအရေးတကြီးပြောစရာရှိလို့. . ကိုတိုးကြီးဒိတ်ကနဲစိတ်ပူသွားသည်. . ။မိုနာနဲ့သူ့အကြောင်းများ. .ဒေါ်အယ်နာ သိသွားပြီလား။သူဒေါ်အယ်နာ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်လိုက်သည်. .။ ဒေါ်အယ်နာကသူ့လက်တဖက်ကိုဖမ်းဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး. . ကိုတိုး. .အန်တီ အကူအညီတခုလိုနေတယ်ကွာ.. ကူညီအုံး. . လို့ပြောသည်. ..။
အင်း..ပြောလေ.. အန်တီ. . ဘာလိုလဲ. . ဒီလို. . ကိုတိုးရာ.. အန်တီ့ညီမလင်မယားလေ. . ဖါးအံမှာ. .လေမုန်တိုင်းကြောင့်.. အိမ်ခေါင်မိုးလန်သွားတယ်တဲ့. . အန်တီ့ဆီစာရောက်တယ်. .အဲဒါ.. အန်တီ.သူတို့ဆီကို ငွေပို့ချင်တယ်. . သိတဲ့အတိုင်းဘဲ. . အန်တီလဲသမီးတွေအတွက်အ၀တ်အစား ၀ယ်ခြမ်းပေးလိုက်တာနဲ့ငွေမပိုဘူး. . ကိုတိုးခဏလှည့်ပါအုံး. . ရတယ်အန်တီ. . ဘယ်လောက်လိုလဲ. .. ရှစ်ရာ. . ရတယ်လေ. . အန်တီဘယ်တော့လိုလဲ. . . . ဒီညကျနော်တို့အလုပ်ကပြန်ရင်.. ပေးမယ်လေ. . ATM က၃၀၀ အများဆုံး.. ဘဲထုတ်လို့ရတယ်ဆို. . ကျနော်အိမ်မှာသိမ်းထားတာရှိပါသေးတယ်. . ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုတိုးရယ်. . အားကိုးပါတယ်. . ကွာ. . ဒေါ်အယ်နာကကိုတိုးကြီးကိုဖက်လိုက်သည်. . ။ကိုယ်ချင်းပူးကပ်သွားတာကြောင့် ကိုတိုးကြီးရဲ့ပေါင်ကြားကအတန်မာမာတောင့်တောင့်ကြီး. . ဒေါ်အယ်နာရဲ့ ပေါင်ကြားကဆီးခုံကြီးကိုဖိကပ်ထောက်မိသွားသည်..။ ကိုတိုးကြီးကလဲသူမဖက်သလိုပြန်ဖက်လိုက်တော့သူ့လက်ဖဝါးတွေက ဒေါ်အယ်နာ့ဖင်အိအိကြီးတွေကိုကိုင်တွယ်မိရက်သားကြီးဖြစ်သွားသည်. .။ အသားခပ်ပျော့ပျော့အနက်ရောင်ဘောင်းဘီဝတ်ထားတဲ့ဒေါ်အယ်နာရဲ့ ဖင်ကားကားကြီးတွေကိုကိုင်ထားမိတော့သူ့လီးကဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ..လှုပ်သွား သည်။ဒေါ်အယ်နာကဖက်ထားတာကိုပြန်မခွါ. . ။ ကိုတိုး. . လို့ခပ်တိုးတိုးခေါ်သည်..။ အန်တီ. . ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာ . . အရမ်းဘဲ . . သိလား . . ရပါတယ် . . အန်တီ . . ဒေါ်အယ်နာ သည် ကိုတိုးကြီး ပုခုံးပေါ် ခေါင်းတင်မှီထားပြီး ကျောပြင်ကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေသည် . . ။
ကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုတိုးကြီး ရဲ့ လီးမာမာကြီး က သူမ ပေါင်ကြားကို တန်းနေအောင်ဘဲ ဖိကပ်မိနေသည် . .။ ကိုတိုး . . ဗျာ .. အန်တီ . . တခု ပြောလို့ ရမလား . . ပြောပါ အန်တီ . . ကိုတိုးကြီး သူ့ လက်ဖဝါးထဲ ရောက်နေတဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေ ကိုအုပ်ပြီး..ကိုင်ပွတ်မိနေသည် . ။ အန်တီ လေ . . ယောက်ျားဆုံးပြီးကထဲက .. ယောင်္ကျားနဲ့ ကင်းကွာနေခဲ့တယ်ကွာ . . သိပ် အထီးကျန်ဆန်ခဲ့တာဘဲ . . တခါတခါ နေလို့တောင် မကောင်းဘူး . . သူ့ ကျောပြင်ကို ဒေါ်အယ်နာ ပွတ်နေသည် . . ။ တင်းတင်းကြီး ဆက် ဖက်ထားနေဆဲ . .။ အောက်ဖက်မှာ လီးကြီး က ဖိကပ်ထားနေဆဲ . .။အဲဒါ . . ဟိုလေ . . ကိုတိုး နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး . . တနေရာရာ မှာ တွေ့ချင်တယ်ကွာ .. အန်တီ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲ ပြောပါရစေတော့ . . အိမ်မှာ က သမီးတွေနဲ့ ဖူးဖူး နဲ့ .. ဆိုတော့ . မလွတ်လပ်ဘူးကွယ် .. .. ကျနော် သဘောပေါက်ပြီ . . အန်တီ . အန်တီ လိုအပ်နေတာတွေ အားလုံး ကျနော် တာဝန်ယူပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးမယ် . .. ကောင်းပြီလေ . . ထမင်းစားချိန်လဲ ပြီးနေပြီ.. ညအပြန် ကျမှ ဆက် ပြောကြမယ်နော် . . ဟုတ်ကဲ့ အန်တီ . . ကိုတိုးကြီး အလုပ်ခွင် ပြန်ဝင်ရပေမဲ့.. စောစောက ဒေါ်အယ်နာ့ဖင်တွေကို ဆုတ်ကိုင်ခဲ့ရတာကို ကျေနပ်နေသည် . . ။ အလုပ်ဆင်းရင် ဒေါ်အယ်နာ့ကို တနေရာ ခေါ်သွားပြီး သူမ ကြာရှည်စွာ ပြတ်လပ်နေရတဲ့ လီး အရသာ ကို ပီပီပြင်ပြင် ပေးလိုက်မည် လို့ စဉ်းစားနေသည် . .။ အလုပ်ဆင်းလို့ အတူတူ အိမ်ပြန်ကြသောအခါ .. ကိုတိုးကြီး သည် အိမ်တန်းမပြန်ဘဲ .. ဒေါ်အယ်နာကို ဈေးပေါတဲ့ မိုတယ် တခု ကို ခေါ်သွားပါ သည် .. ။ ဒေါ်အယ်နာ က သူ .. အိုဗာတိုင် ဆင်းရ သည် လို့ သမီးတွေ ကို ဆိုင်မှာကထဲက ဖုန်းဆက်ထားလိုက် သည် ။
မိုတယ်အခန်းထဲဝင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒေါ်အယ်နာသည်အငမ်းမရဘဲသူ့ နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုတ်နမ်းတော့သည်.. ။နှစ်ယောက်သားကုတင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားကြရ သည်.. ။နှစ်ယောက်သားပြိုင်တူလိုဘဲကိုယ်ပေါ်ကအ၀တ်အစားတွေကိုအမြန်ဘဲ ချွတ်ခွါကြသည်..။ ဒီလိုဖြစ်တာကိုတိုးနုတ်လုံပါစေနော်. . ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောနဲ့ကွာ. . စိတ်ချပါ.. အန်တီ. . ဒေါ်အယ်နာသည်အ၀တ်အစားလုံးဝ မရှိတော့သောအခါ. . ဖြူဝင်းတောင့်တင်းဆဲ ကိုယ်လုံးတွေကြောင့်သူ့စိတ်တွေကိုဟုန်းကနဲထကြွစေတော့.. ကိုတိုးကြီးလဲ ဆူဖြိုးတင်းမာဆဲနို့ကြီးတွေကိုအငမ်းမရဘဲစို့ပါတော့သည်. .။ဒေါ်အယ်နာ့ ဖင်တုံးကြီးတွေကိုသူဆုတ်နယ်သည်.. ။ဒေါ်အယ်နာသည်လဲကိုတိုးကြီးရဲ့ တုတ်ခိုင်တဲ့လီးမဲမဲကြီးကိုတအံ့တသြကြည့်ပြီး.. မရှက်နိုင်တော့ဘဲ..ဆုတ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ်နေသည်. . ။ အို.. ကောင်းလိုက်တဲ့ဟာကြီးကွယ်. .ဆိုင်ခေါင်မိုးပေါ်ထဲက အန်တီ.. သတိထားမိတယ်. .. မာတောင်နေတာကြီး. . ဟင်း. . ဒါအန်တီ့အတွက်.. အန်တီစိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်ကျနော်လိုးပေးမှာ. . ကိုတိုးကြီးကလိုးပေးမှာလို့ပြောလိုက်သံကြားရတာကြောင့်ဒေါ်အယ်နာ ကြက်သီးတွေဖျန်းကနဲထသွားရသည်. . ။လီးနဲ့ကင်းဝေး.. ကင်းကွာနေတာ… အရမ်းကြာနေပြီ. .။ လီးကြီးကိုတင်းတင်းဆုတ်ကိုင်နေသည်.. ။ဟွန်း. .. စံချိန်မှီလီးကြီးပါလား. .။တဏှာအရှိန်ကြောင့်လားမသိ.. ။
လီးတန်ကြီးသည်ပူနွေးနေသည်..။ ကိုတိုးကြီးကဒေါ်အယ်နာ့ကိုကုတင်စောင်းမှာပက်လက်လှန်လှဲအိပ်စေလိုက်ပြီးသူမ ပေါင်ဖွေးဖွေးဖြူဖြူကြီးတွေကိုဖြဲကားလိုက်ပြီး. . ဒူးထောက်ထိုင်ချကာ..ဖေါင်းခုံးနေတဲ့ စောက်ပတ်ကြီးကိုစပြီးနမ်းပါတော့သည်. .။ ကိုတိုး. . ကိုတိုး. .. ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ. . အို. .. မင်း..မင်း….စောက်ပတ်.. စောက်ပတ်ကိုယက်မလို့လား. . . အိုကွယ်. . မင်းမို့မရွံမရှာ. . ဟန်လုပ်ခါပြောသာပြောနေရသည်. . ။စောက်ပတ်အယက်ခံကြည့်ချင်နေတာ ကြာပါပြီ. . ။သွားလေသူလင်ကြီးကလဲလူရိုးကြီးလေ. . ။ထမိန်လှန်ပြီး… တက်ဆောင့်တာဘဲသူနားလည်တာ. . စောက်ပတ်ယက်မပေးဘူးဘူး. .. ။ကိုတိုးကြီး.. ဒေါ်အယ်နာရဲ့စောက်ပတ်ကြီးကိုအားရပါးရယက်ပါပြီ. .. ။ကိုတိုးကြီးရဲ့လျာကြီးက အပြားလိုက်ကြီးဖိကာဖိကာယက်ပေးနေသည်. . ။ကိုတိုးကြီးရဲ့လက်တွေက ဒေါ်အယ်နာရဲ့ဖင်အောက်ကိုသွင်းကာဖင်တုံးတွေကိုဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်. .။ တပြတ်ပြတ်ယက်နေရာကဒေါ်အယ်နာ့စောက်စိကိုပွက်ကနဲစုတ်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ အို.. ဟင့်. . ဒေါ်အယ်နာဖင်ကြီးတွေမြောက်တက်သွားရသည်.. ။အရသာဖူး..စောက်စိကို အစုတ်ခံရတာဘယ်လောက်အရသာထူးသွားသလဲဆိုတာ..မပြောပြနိုင်လောက်အောင်ပါဘဲ .. ။ကိုတိုးရယ်. .. အန်တီ့ကိုနှိပ်စက်နေတာလား. .တော်..တော်… တော်တော့. . ကိုတိုးကြီးကစောက်ပတ်ကမျက်နှာခွါလိုက်ပြီးမော့ကြည့်သည်. .။ လုပ်တော့. . အန်တီ့ကိုလုပ်ပေးတော့. . . ကိုတိုးကြီးကပြုံးစိစိနဲ့ ဘာလုပ်ရမှာလဲ. . လို့ပြန်မေးသည်..။ ဒေါ်အယ်နာမျက်စောင်းလေးထိုးလိုက်သည်. .။
လိုးပေး…. မင်းရဲ့လီးတန်ကြီးနဲ့အန်တီ့အဖုတ်ထဲကိုလိုးဆောင့်ပေး. .ကဲ သိပလား. . ကိုတိုးကြီးကပက်လက်အိပ်နေသောဒေါ်အယ်နာအပေါ်ကတက်မှောက်ပြီး လှေကြီးထိုးပုံစံနဲ့ဘဲ…စပြီးလိုးလေသည်..ဒေါ်အယ်နာရဲ့..စောက်ပတ်မှာ..မလိုးတာကြာလို့.. စထည့်ထည့်ချင်းမှာအရေတွေစိုရွှဲနေသည့်တိုင်ကျပ်နေသည်. .။ နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာမှပြတ်လပ်နေတဲ့လီးနဲ့ပြန်အလိုးခံရတာမို့ဒေါ်အယ်နာမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်ရင်နေသည်. .။ ဖြေးဖြေး.. ကိုတိုး. . နာတယ်. . ကိုတိုးကြီးရဲ့လီးကတုတ်လှသည်. .။ဒေါ်အယ်နာရဲ့..စောက်ပတ်ထဲ.. .. တစ်ဆို့နေလောက်အောင်.. တုတ်သည်. .။ကိုတိုးကြီး ကသိပ်တော့ညှာမနေ.. ။သူသိသည်. . ။မလိုးတာကြာနေလို့စလိုးလိုးချင်းမို့ ဖြစ်တာပါ.. ။နောက်ကျရင်အဆင်ပြေမှာဆိုတာသိသည်. .။ ဒေါ်အယ်နာမှာကောင်းလှတဲ့လိုးဆောင့်ပေးချက်တွေကြောင့်မျက်ရေတွေတောင် လည်လာရသည်. . ။ကိုတိုးကြီးကဒေါ်အယ်နာလိုတောင့်တောင့်ဆော်ကြီးကို ဘယ်လိုလိုးပေးရမယ်ဆိုတာသိသည်. .။ ကိုတိုးကြီးလိုးပေးတာကိုဒေါ်အယ်နာစွဲသွားရသည်. .။ ကိုတိုးရယ်. . သူသိပ်လုပ်တတ်ပါလား. . လို့အောက်ကနေပြန်ပင့်ပင့်ပေးရင်း ပြောလိုက်သည်.. ။ ကောင်းလား. . အန်တီ. . အရမ်းအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ. . ဒေါ်အယ်နာပေါင်တွေကိုအစွမ်းကုန် ဖြဲကားပေးထားသလိုအောက်ကနေတအားကော့ပေးသည်. . ။ဖင်ကြီးတွေကို မွေ့ရမ်းပေးသည်။ကိုတိုးကြီးအသားကုန်ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးသည်. .။ အရေတွေတအားစိုနေရွှဲနေတာကြောင့်လိုးဆောင့်လိုက်တိုင်း. .ဘွတ်..ဘွတ်..ဖွတ်..ဖပ် ဆိုတဲ့အသံတွေညံနေသည်. .။
အို..အား… အား. . အား. .. ကောင်းတယ်. .ဆောင့်.. ဆောင့်. . . တအားဆောင့်ပေး. ဆောင့်ပေးတာကတော့တကယ်ပီပီပြင်ပြင်ဘဲ. .။ ဆောင့်.. ဆောင့်..အို…ကောင်း.. ကောင်း. .အဟာ…အား……. အင်း. . ကိုတိုးကြီးရောဒေါ်အယ်နာရောပြိုင်တူ. . ပြီးသွားကြရသည်. .။ ဒေါ်အယ်နာကကိုတိုးကြီးကျောပြင်ကိုတအားဆွဲဖက်ထားသည်. . ။ မထုတ်နဲ့ . . မထုတ်နဲ့. .တဆုံးထည့်ထားပါအုံး..ကိုတိုး.. ကိုတိုးကြီးကနောက်ထပ်လိုးလျင်သေးပေမဲ့ဒေါ်အယ်နာကအိမ်ပြန်သိပ် နောက်ကျနေမှာမို့နောက်တခါမှကွာ.. ဆိုပြီး. . ပြန်ကြဖို့ပြောလေသည်. . ။ကားပေါ်မှာ ဒေါ်အယ်နာသည်ကိုတိုးကြီးပုခုံးပေါ်မှာခေါင်းလေးမှီကာ.. စောစောကလိုးခဲ့ရတာကို ပြန်တွေးပြီးပီတိတွေဖြစ်နေသည်.. ။ အိမ်မှာလဲဘယ်သူမှမရှိရင်ကိုတိုးနဲ့တွေ့ကြမယ်.. သိလား. . အန်တီလိုချင်ရင်ခေါ်လိုက်ဗျာ.. အန်တီ့ကိုကျနော်စိတ်ကြိုက်လိုးပေးမယ်. . ကိုတိုးကြီးသည်ဒေါ်အယ်နာကိုကောင်းကောင်းလိုးပေးခဲ့ရတာတော်တော်ဘဲ ကျေနပ်နေသည်..။ နောက်နေ့မှာမနက်အစောကြီးကိုတိုးကြီး…အိပ်ပျော်နေခိုက်… ဒေါ်အယ်နာသည်.. အိပ်ရာထဲမှာမနေ့ကအလိုးခံခဲ့ရတာကိုပြန်သတိရပြီးစိတ်တွေထလာရပြန်သည်. .။ သမီးတွေအိပ်နေဆဲအချိန်မို့အသာ.. ခြေဖေါ့နင်းကာမြေအောက်ထပ်ဘေ့စ်မင့်ကို ဆင်းသွားလိုက်သည်..။ဒေါ်အယ်နာရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးသည်အထဲကလှိုက်ပြီးယားနေသည်. .။ ခံချင်စိတ်တွေကတားဆီးလို့မရနိုင်.. ။
ထိန်းလို့မရတော့. . ။အရမ်းခံချင်နေပြီ. .။ ကိုတိုးကြီးသည်လီးကြီးပေါ်ပြီးအိပ်ပျော်နေသည်. . ။အမှောင်ထဲမှာဘဲဒေါ်အယ်နာက ကိုတိုးကြီးရဲ့လီးကြီးကိုစမ်းလိုက်သည်. .။အို…တောင်နေလိုက်တာ.. မာမာကြီး. .။ ဒေါ်အယ်နာအချိန်ဆွဲမနေတော့. . ။ကိုတိုးကြီးအပေါ်ကိုတက်ခွထိုင်လိုက်သည်..။ ဟင်.. ဘယ်သူလဲ.. အို.. အန်တီ. . ကိုတိုး. . အန်တီအိပ်လို့မရဘူးကွယ်. . အရမ်းလိုချင်လာတယ်. .အရမ်းယားနေတယ် .. ဒါကြောင့်ဆင်းလာတာ. . လိုးရအောင်ကွယ်. . ဒေါ်အယ်နာအိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေဆဲကိုတိုးကြီးရဲ့လီးတန်ကြီးကိုဖမ်းဆွဲကာသူမ စောက်ပတ်ပေါက်မှာတေ့လိုက်သည်.. ။ပြီးတော့ဖြေးဖြေးဖိထိုင်ချသည်. .။ အရေတွေစိုစိုရွှဲနေတဲ့စောက်ပတ်ထဲဗျိကနဲစွပ်မိသွားသည်.. ။အင်း. . နဲတဲ့လီးကြီး မဟုတ်ဘူး..။ဒေါ်အယ်နာ.. စွဲနေရပြီ. .။ ဆက်ပြီးထိန်းပြီးဖိချသည်. . ။တင်းကနဲ.. ထိထိမိမိကြီးလီးကြီးတဆုံးဝင်သွားသည်..။ အီး… ရှီး. .. ဒေါ်အယ်နာ.. ဖင်ကိုအသာပြန်ကြွပြီးအသာထိန်းကာပြန်ထိုင်ချသည်. . ။ အင်း. .ဟင်း ကောင်းလိုက်တာကွာ. . လီးကြီးသည်စောက်ပတ်ထဲအပြည့်အသိပ်ကြီးကျပ်ကျပ်ကြီး ဖြစ်နေသည်. . ။ကိုတိုးကြီးလဲဒေါ်အယ်နာကိုအောက်ကနေစပြီးပင့်ပေးလာသည်. .။ သူမဖင်ကြီးတွေကိုဆုတ်ကိုင်ပြီးမလိုက်ဆွဲဖိလိုက်လုပ်ပေးသည်.. ။စောက်ပတ်နဲ့ လီးဝင်ထွက်ပွတ်တိုက်မှုကနှစ်ဦးစလုံးကိုကောင်းလွန်းစေတဲ့ကာမအရသာတွေ ပေးနေပြီ။ဘွတ်…ဘွပ်..ဘွတ်.. …ဘွပ်.. ဗျိ. . . အရှိန်ရလာသည်.. ။ဒေါ်အယ်နာတအားဆောင့်နေပြီ.. ။အောက်ကလဲကိုတိုးကြီးက ပင့်လိုးပေးသည်.. ။
သည်အချိန်မှာ… ရေငတ်လို့နိုးလာတဲ့ဖူးဖူးသည်မီးဖိုထဲ ရေဆင်းသောက်တုံးမြေအောက်ခန်းထဲကတအင်းအင်း.. အသံတွေနဲ့ဖွတ်ဖပ်ဘွတ်ဘပ် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အသံတွေကြားလိုက်ရတာကြောင့်ကိုတိုးကြီးနဲ့မိုနာတို့တော့ လိုးနေကြပြီဆိုပြီး… ချောင်းကြည့်လိုတာကြောင့်လှေခါးကခြေဖေါ့နင်းကာ… ဆင်းသွားလေသည်.. ။သည်အချိန်မှာလိုးနေကြသူဒေါ်အယ်နာနဲ့ကိုတိုးကြီးတို့မှာ ကာမဇောကပ်နေကြတဲ့သူတွေမို့.. ဖူးဖူးဆင်းလာတာကိုလုံးဝ သတိမထားမိဘဲ . . သူတို့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့ကိုဘဲအာရုံထားနေကြသည်. .။ ဖူဖူးမှာအမှောင်ထဲမျက်စိကျင့်သားမရသေးလို့ကုတင်ပေါ်လိုးနေကြတဲ့သူတွေသာ ဘယ်သူဆိုတာပထမသတိမထားမိသေးပါဘူး..။ သူမထင်တာကမိုနာနဲ့ကိုတိုးကြီးဘဲလို့ထင်နေသည်. . ။လိုးနေကြသူတွေလဲ တဖြေးဖြေးနဲ့အရှိန်မြင့်လာကြသည်.. ။ကိုတိုးကြီးလဲအောက်ကနေရတာ အားမလိုအားမရဖြစ်လာသည်.. ။ အန်တီ. . ကျနော်အပေါ်ကလိုးပေးတော့မယ်. . လို့ပြောလိုက်သည်.. ။ ချောင်းနေသောဖူးဖူးလဲကိုတိုးကြီးစကားသံကြားလိုက်ရမှမိုနာမဟုတ်ဘဲဒေါ်အယ်နာ ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ပြီးအလွန်ဘဲအံ့သြသွားရလေသည်.. ။ကိုတိုးကြီးလဲ ဒေါ်အယ်နာနဲ့ပထမဆုံးစလိုးတုံးကပြီးစလွယ်ဘဲလှေကြီးထိုးပုံစံနဲ့ဘဲအပြီး.. လိုးခဲ့ပေမဲ့.. အခုဒေါ်အယ်နာကိုဖင်ထောင်ခိုင်းပြီးလိုးချင်တာကြောင့်.. အန်တီ .. ဖင်ကုန်းပေးပါလား. . လို့ပြောလိုက်သည်.. ။ဒါကိုကြားလိုက်တဲ့ဖူးဖူးသည်..သူ ရိုသေလေးစားတဲ့.. အန်တီဒေါ်အယ်နာတယောက်ဖင်ကုန်းရတော့မည်ကိုတွေးပြီး ခစ်ကနဲရယ်လိုက်မိသည်.. ။တော်ပါသေးသည်.. ။
လိုးနေသောဒေါ်အယ်နာနဲ့ ကိုတိုးကြီးမကြားလိုက်ဘူး. .။ ဒါပေမဲ့.. ဒေါ်အယ်နာသည်ကိုတိုးကြီးဖင်ကုန်းခိုင်းတာကိုမလုပ်.. ။နောက်မှ .. ကိုတိုးရယ်. . အပေါ်ထပ်မှာသမီးတို့ရှိနေတယ်. . ဒီအတိုင်းဘဲလုပ်ပါတော့ . .အချိန်မရှိဘူး. .လို့ပြောတာနဲ့ကိုတိုးကြီးလဲ.ဒေါ်အယ်နာကို..ကုတင်စောင်းမှာပေါင်ကားပြီး … သူမရဲ့ပေါင်တန်ဖြူဖြူကြီးတွေကိုသူ့ပုခုံးပေါ်ထမ်းတင်ပြီးလိုးသည်.. ။ အင်းကနဲအင်းကနဲဆောင့်ဆောင့်လိုးတာ.. ။ချောင်းကြည့်နေတဲ့ဖူးဖူး..ရင်တွေ တုန်နေသည်.. ။ကြက်သီးတွေတဖြန်းဖြန်းထရသည်..။ဒေါ်အယ်နာ…အီးအီး.. အီးနဲ့ ကျိတ်ညည်းပြီးဆောင့်ချက်များကိုကျေနပ်နေသည်. . ။ကိုတိုးကြီးလဲ အချိန်ဆွဲမနေတော့ဘဲဒလစပ်လိုးဆောင့်ကာပြီးသွားတော့သည်. .။ ကောင်းလား. . အန်တီ. . အရမ်းကောင်းတာဘဲကွာ….. အီဆိမ့်နေတာဘဲ. . အန်တီပြီးရဲ့လား. . ၂ကြိမ်တောင်ပြီးတယ်. . ကျေးဇူးဘဲကိုတိုး. . ကဲအန်တီတက်တော့မယ်. . ဒေါ်အယ်နာထမိန်ကောက်ဝတ်နေချိန်ချောင်းနေတဲ့ဖူးဖူးလဲကဗျာကရာတက်ပြေးရ သည်. . ။ဖူးဖူးရဲ့ထမိန်အနောက်ဘက်မှာအရေအကွက်ကြီးရွှဲနေသည်.. ။ဖူးဖူးလဲ ရင်တွေတလှပ်လှပ်နဲ့သိလိုက်မြင်လိုက်ရတာကိုမယုံနိုင်. . ။အန်တီအယ်နာနဲ့ ကိုတိုးကြီးလိုးကြတာများကိုကြည့်ပြီးဖူးဖူးလဲစိတ်တွေထကြွကာ…အလိုးခံချင်စိတ်တွေ အရမ်းဖြစ်ပေါ်နေတော့သည်..။ဟိုတနေ့ကသူမ..တွေ့လိုက်ရသောကိုတိုးကြီးရဲ့လီးမဲမဲတုတ်တုတ်ကြီးကိုတမ်းတလိုလားနေ ပေသည်.. ။ဖူးဖူးရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကသူမပေါင်ကြားကအရေတွေ..စိုစိုရွှဲနေသည့် ခုံးမောက်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီး ကို ဖိကာဖိကာ ပွတ်နေမိပါတော့သည် . . …ပြီးပါပြီ။